Nature – NU MYAT AROUND THE WORLD
November 16, 2019 April 20, 2021 Posted in Adventure, Europe, Natural Wonder, Photo Essay, UncategorizedTagged Europe, Iceland, Nature, northern light, TravelLeaveacomment
ဥတ္တရအလင်းတန်း ရှာပုံတော် ဖွင့်ခဲ့တုန်းက…
ဥတ္တရအလင်းတန်းလို့ခေါ်တဲ့ Northern Light ကိုမြင်ရဖို့ဆိုတာ Traveller အတော်များများရဲ့ အိပ်မက်ပါ… ခရီးသွားအများစုရဲ့ Bucket List ထဲမှာ ပါလေ့ရှိကြပါတယ်။
Northern Light မြင်ရဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ကံကောင်းမှ ဖြစ်မှာပါ။ Northern Light ပေါ်တဲ့ နိုင်ငံနဲ့ နေရာ ဖြစ်ရမယ့်အပြင် မြင်ရတဲ့ ရာသီလည်းဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါတောင်သူက ပေါ်ချင်မှပေါ်ဦးမှာပါ။ တိမ်ကင်းစင်ပြီး သံလိုက်လှိုင်းတွေလည်း အားကောင်းနေရပါဦးမယ်။ အဲ့လိုအားကောင်းဖို့ကလည်း အတော်ရှားပါတယ်။ ဆိုတော့ကာ အင်မတန် ကံကောင်းမှ မြင်ရနိုင်တဲ့အရာပါ။
နုမြတ်ကတော့ အရင်လက Iceland ရောက်တုန်းက ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ မြင်ရခဲတဲ့ ဒီ Northern Light ကြီးကို အားရပါးရတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ Iceland ရောက်နေတဲ့ ငါးရက်တာကာလအတွင်း ၃-၄ရက်လောက်မှာကို ပေါ်နေတာပါ။ နောက်ဆုံးရက်မှာဆိုရင် မိုးတောင်မချုပ်သေးဘူး Northern Light ကို မှောင်စပျိုးနေတဲ့ ကောင်းကင်ပြာပြာပေါ်မှာ ကားစီးနေရင်းနဲ့ လှမ်းမြင်ရတဲ့အထိ ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။
နုမြတ် Iceland ကိုသွားခဲ့တာ ထူးခြားတဲ့ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်တွေကြောင့်ဖြစ်သလို Northern Light မြင်ဖူးချင်တာကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ Iceland ဘယ်လောက်ဈေးကြီးကြီး နုမြတ်တော့ Northern Light ကို မြင်လိုက်ရတာနဲ့ Iceland လာရကျိုးနပ်သွားပါပြီ 😍
Northern Light ဆိုတာ ❓
Northern Light ဆိုတာဟာ ညဉ့်ကောင်းကင်ယံမှာ ဖြာထွက်တောက်ပနေတတ်တဲ့ ရောင်စုံ အလင်းတန်းတွေပါပဲ။ Northern Lights ကို Aurora Borealis လို့လည်း ခေါ်ကြပါသေးတယ်။ အတိုကောက်ကတော့ Aurora ပေါ့နော်။
Northern Lights တွေဟာ ကမ္ဘာမြေမြင် အထက် မိုင် ၆၀ နဲ့ ၁၅၀ လောက်မှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ Nothern Light က ပေါ်ဖို့ခက်သလို ပေါ်ပြီဆိုရင်လည်း အမြဲပေါ်နေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါပေါ် အကြာဆုံးနာရီဝက်လောက်ပါ။ ပေါ်တဲ့အခါမှာလည်း ကောင်းကင်ထဲမှာ ကနေသလို၊ လွင့်နေသလို ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်နေတာပါ။ သဘာဝတရားကြီးက ဆန်းကြယ်သားနော်။ မှော်ပညာနဲ့ ဖန်တီးထားသလားတောင် ထင်မှတ်မှားရလောက်ပါပေတယ်။
Northern Light ကို အဓိကအားဖြင့် အစိမ်းရောင်အနေနဲ့မြင်ရပေမဲ့ တစ်ခါတလေ အစိမ်းရောင်နဲ့အတူ အနီလေးတွေ ခရမ်းလေးတွေပါ ပေါ်တတ်တယ်တဲ့။ အပြာရောင်လေးတွေလည်း ရှားရှားပါးပါး ပါလာတတ်သေးတဲ့။ ကိုယ်တွေတွေ့ခဲ့တာကတော့ အစိမ်းရောင်ပါ။
Colorful Aurora over Jokulsarlon Photo – Credit
Aurora (သို့) Northern Lights တွေက တကယ်တော့ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေပါ။ Solar Wind ဖြစ်စဉ်ကြောင့် နေမှာရှိတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်ဆောင်အမှုန်လေးတွေက ကမ္ဘာ့လေထုထဲကို ရောက်ရှိလာပြီး လေထုထဲက ဓာတ်ငွေ့အမှုန်တွေနဲ့ ပွတ်တိုက်တာကြောင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
Solar Wind ဖြစ်စဉ်ကတော့ ဒီလိုပါ။ နေရဲ့ မျက်နှာပြင် အပူချိန်က ၅၈၀၀ ကယ်ဗင်ထိ ပူပြင်းပါတယ်။ နေကအရမ်းပူပြင်းသလို နေမှာရှိတဲ့ ဓာတ်ငွေ့မော်လီကျူးတွေဟာ အချင်းချင်း အကြိမ်များစွာပွတ်တိုက်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပေါက်ကွဲတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့လိုပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အခါ အီလက်ထရွန်နဲ့ ပရိုတွန်အမှုန်တွေဟာ နေကနေလွတ်ထွက်ကာ အာကာသကို လွင့်စင်သွားကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ ကမ္ဘာလေထုထဲကိုပါ ဒီအမှုန်တွေ ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့သံလိုက်စက်ကွင်းကလည်း အားပြင်းတော့ ဒီအမှုန်တွေက ကမ္ဘာမြေပေါ် တိုက်ရိုက်မကျရောက်နိုင်ဘဲ သံလိုက်စက်ကွင်း အားအပျော့ဆုံးဖြစ်တဲ့ ဝင်ရိုးစွန်းဒေသတွေဆီ လမ်းကြောင်းသွေဖယ်သွားကြပါတယ်။ ဝင်ရိုးစွန်းဒေသတွေဆီ ရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဓာတ်ငွေ့အမှုန်တွေနဲ့ နေကနေ လွင့်စင်လာတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်ဆောင် အမှုန်တွေ ပွတ်တိုက်ကြပြီး လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်ကာ ဥတ္တရအလင်းတန်းအဖြစ် မြင်တွေ့ရတာပါ။
Northern Light မြင်ရတဲ့နေရာတွေ ‼️
Northern Lights ကို ကမ္ဘာ့ဝင်ရိုးစွန်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာ့မြောက်ဖက်စွန်းပိုင်းနဲ့ ကမ္ဘာ့တောင်ဖက်စွန်းပိုင်းတွေမှာသာ တွေ့ရတာပါ။ အဓိကမြင်တွေ့နိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့ Alaska နဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံပါ။ ဥရောပနိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ နုမြတ်ရောက်ခဲ့တဲ့ Iceland အပြင် Greenland နဲ့စကင်ဒီနေးဗီးယားနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ နော်ဝေ၊ ဆွီဒင်၊ ဖင်လန်နဲ့ ဒိန်းမတ်တို့မှာ တွေ့ရမှာပါ။ ရုရှားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာက နော်ဝေနိုင်ငံထဲက Lofoten ကျွန်းစုတဲ့လေ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Lofoten ကျွန်းကဆောင်းရာသီတွေမှာ တအားမအေးလို့ပါ။ ကိုယ်တွေ သွားခဲ့တဲ့ Iceland ကတော့ ကျွန်းနိုင်ငံမို့လို့လေတအားကြမ်းပါတယ်။ အေးရတဲ့ကြားထဲ လေကလည်း တအားတိုက်တော့ အေးအေးဆေးဆေးကြည့်လို့ မရတဲ့အတွက် Northern Light ကို အဓိကထားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် Iceland ကို Recommend မပေးချင်ပါဘူး။
Northern lights (aurora borealis) illuminate the sky over Reinfjorden in Reine, on Lofoten Islands, Arctic Circle, on September 8, 2017. / AFP PHOTO / Jonathan NACKSTRAND (Photo credit should read JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Getty Images)
ဘယ်အချိန်မှာ အမြင်ရဆုံးလဲ ❓
Northern Light ကို မြင်ရဖို့ဆိုတာ မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်ဖို့လိုသလို ဆောင်းတွင်းဖြစ်ဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။ ဆောင်းတွင်းကာလတွေဖြစ်တဲ့ အောက်တိုဘာလကနေ မတ်လအထိက Northern Light ရာသီပါ။ ဆောင်းတွင်းညတွေမှာ ညမှောင်တာနဲ့ မြင်ရနိုင်ပေမဲ့ ည၁၀နာရီနဲ့ မနက်၁နာရီကြားကတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့အကောင်းဆုံးပါ။ ဒါပေမဲ့ ညတိုင်းလည်း မမြင်နိုင်ပါဘူး။ တိမ်ကင်းစင်တဲ့ညဖြစ်ဖို့လိုသလို အလင်းတန်းတွေ ကွန့်မြူးအားကောင်းနေမှသာ ကောင်းကောင်းမြင်ရမှာပါ။
Aurora Dancing over Iceland landmark Kirkjufell mountain Photo Credit – hampitakkull-jakkree
Northern Light ကို ၃ရက်ပဲ ကြိုပြီးခန့်မှန်းလို့ရတာပါ။ ဘယ်နေရာတွေမှာ ပြင်းအားဘယ်လောက်ပေါ်မလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းလို့ရတဲ့ Website တွေ App တွေရှိပါတယ်။ Aurora လို့ခေါ်တဲ့ App လေးကို ဖုန်းထဲသွင်းထားလိုက်ပါ။ သံလိုက်လှိုင်းအား အပြင်းအပျော့ပေါ်မူတည်ပြီး Level 1 to7အထိရှိပါတယ်။ Level7ဆို လျှပ်စစ် သံလိုက်လှိုင်းတွေ အားအပြင်းဆုံးပေါ့။ ကိုယ်တွေကြည့်တဲ့ညက Level5ဆိုတော့ အတော်ကို ကံကောင်းပါတယ်။ ပုံမှန်က Level 1-2 လောက်ပဲမြင်ရတာတဲ့။ 6-7 ကမရှိသလောက်ပဲတဲ့။5ဆိုတာတော်တော်ကောင်းနေပြီတဲ့လေ။ တကယ်လည်း ကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံး စိမ်းနေတာ ပုံထဲမှာသာကြည့်ကြည့်ပါတော့။ ဒါတောင်ရိုက်ခါနီး ကင်မရာအဆင်မပြေလို့ ဖုန်းကို လက်နဲ့ကိုင်ရိုက်ထားတာပါ။ ကင်မရာနဲ့ Tripod နဲ့ဆို ပိုတောင်ကောင်းပါဦးမယ်။
Northern Light ရှာပုံတော် Tour တွေ
Iceland မှာက Northern Light Hunting လို့ခေါ်တဲ့ ဥတ္တရအလင်းတန်း ရှာပုံတော် Tour တွေ ညဘက်မှာ ထွက်လေ့ရှိပါတယ်။ Northern Light ထွက်မထွက်က အစောကြီး ကြိုမသိနိုင်တော့ Tour ကို အစောကြီးကြိုမဝယ်ရဲပါဘူး။ ရောက်တဲ့အခါမှ Northern Light ခန့်မှန်းတဲ့ Website တွေကြည့်ပြီး အားအပြင်းဆုံးရက်ကို ရွေးပြီး Tour ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။
Northern Light ကြည့်တဲ့ Northern Light Hunting Tour တွေကလည်း Company အမျိုးမျိုး ဈေးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ $50 ကနေ $100 ကျော်ထိ အစားစားရှိပါတယ်။ တချို့ Tour တွေဆို Northern Light နဲ့ နောက်ခံထားပြီး ဓာတ်ပုံပါရိုက်ပေးတဲ့ Service တောင် ပါပါတယ်။ Northern Light က မီးအလင်းရောင်တွေ မရှိ မဲမှောင်နေတဲ့ ကွင်းပြင်ထဲသွားပြီး ကြည့်ရတာဆိုတော့ နုမြတ်တို့တည်းတဲ့ မြို့တော် Reykjavik ကနေ မြို့ပြင်ကို နာရီဝက်တစ်နာရီလောက်မောင်းသွားရပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ Tour တွေက ည၈နာရီ-၉နာရီလောက်မှာ စထွက်တတ်ပြီး စုစုပေါင်း ၃-၄နာရီလောက်ကြာတတ်ပါတယ်။
နုမြတ်တို့က တည်းတဲ့ ဟိုတယ်ကနေ ရောင်းတဲ့ Tour ကို Booking တင်ခဲ့ပါတယ်။ Tour အရ ည ၈နာရီ ဟိုတယ်ကို လာခေါ်ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ရာသီဥတုအကြောင်းပြပြီး Tour cancel ဖြစ်ကာ မထွက်ဖြစ်ကြောင်းကို ညနေလောက်မှာမှ Email လှမ်းပို့ပါတယ်။ အဲ့နေ့ကတစ်နေကုန် လျှောက်လည်နေတော့ ဖေဖေက Email ဝင်တာကို မသိလိုက်ပါဘူး။ ညဘက်လာကြိုခါနီးမှတွေ့လိုက်ပြီး အားလုံးစိတ်ပူသွားကြပါတယ်။ Website တွေ App တွေမှာတော့ ဒီညမှာ Northern Light ပေါ်မယ့်အပြင် အားတောင်မှ ကောင်းနေတာဆိုတော့ ကိုယ်တွေလည်း ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဟိုတယ်က ဝန်ထမ်းတွေကို မေးကြည့်တော့လည်း ရာသီဥတုကောင်းနေတာကို ဘာလို့ Tour Cancel လဲမသိ ထူးဆန်းတယ်ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။
ဟိုတယ်က တခြားဧည့်သည်တွေကို တခြား Tour car တွေကလည်း တစ်စီးပြီးတစ်စီးလာခေါ်နေပါပြီ။ ကိုယ်တွေသာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ခေါင်းမီးတောက်နေရော။ Hotel မှာ ဧည့်သည်လာခေါ်တဲ့ Tour တွေကို ခုမှဝယ်ပြီးလိုက်မယ် လုပ်ပြန်တော့လည်း နေရာပြည့်နေလို့ လက်မခံကြပါဘူး။ Online မှာကလည်း အချိန်နောက်ကျနေလို့ Tour တွေဝယ်လို့မရတော့ပါဘူး။ Taxi ကို မေးကြည့်တော့လည်း စီးလုံးငှားတဲ့ဈေးကများပါတယ်။ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတုန်း ကံတရားက ကိုယ့်ဘက်ပါပြီး ည၉နာရီထွက်တဲ့ Tour တစ်ခုမှာ နေရာရှိနေပါတယ်။ ဟိုတယ်ကိုလာခေါ်တဲ့ Tour Car တစ်ခုမှာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ကိုယ်တွေလည်း ဝမ်းသာအားရ လိုက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။
ကားကမြို့ပြင်နည်းနည်းထွက်လိုက်တာနဲ့ ကားပေါ်ကနေ Northern Light တွေကို စမြင်နေရပါပြီ။ ကားဆရာက လမ်းကြားတစ်ခုထဲချိုးပြီး အလင်းရောင် ပိုပြီးမြင်ရမယ့် လူလည်းရှင်းမယ့် ကွင်းပြင်တစ်ခုစီ မောင်းခေါ်သွားပါတယ်။
ကားပေါ်ကဆင်းလည်း ဆင်းရော အားလားလား လေတွေလေတွေ တိုက်တယ်ဆိုတာ လူတောင်လွင့်ထွက်မတတ်ပါပဲ။ Iceland ကလေပြင်းရတဲ့အထဲ ကွင်းပြင်ကြီးထဲဆိုတော့ လေတအားထန်နေတာပေါ့။ ဒီရက်ပိုင်းကလည်း လေထန်တဲ့ရက်ဖြစ်နေတော့ အရမ်းဆိုးပေါ့။ တစ်နာရီမိုင်၇၀ ကျော်နှုန်း အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့တိုက်နေတာပါ။ လေထန်ရတဲ့အထဲ ရာသီဥတုကလည်း တအားအေးတာပဲ။ အပူချိန်က အနှုတ်ပြနေတော့ ရာသီဥတု တအားဆိုးပါတယ်။ မှောင်မှောင်မဲမဲထဲ လေအေးကြီးတွေ ဖြတ်ဖြတ်တိုက်တာဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့။
ဒါပေမဲ့လည်းလေ ကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးအပြည့် ဥတ္တရအလင်းတန်းတွေ ကွန့်မြူးနေတော့ ရာသီဥတုဆိုးတာလည်း ဂရုမစိုက်နိုင်ပါဘူး။ မြင်ရခဲတဲ့၊ ထူးဆန်းတဲ့ သဘာဝတရားကြီးကို တအံ့တအော ငေးကြည့်မိတာပါပဲ။ အမယ် ဥတ္တရအလင်တန်းလေးတွေက ငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးတော့။ ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်နဲ့ ကပြဖျော်ဖြေနေသလိုလို…
တကယ်တော့ Northern Light က ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ မြင်ရသလို အစိမ်းတောက်တောက်မဟုတ်ပါဘူး။ အစိမ်းနုနုဖျော့ဖျော့လေးတွေ ကောင်းကင်မှာ ပေါ်နေတာပါ။ တိမ်လွှာလေးတွေမှာ အစိမ်းနုလေး သန်းနေသလိုလေးပေါ့။ အစိမ်းဖန့်ဖန့်လေးတွေက ကင်မရာထဲရောက်သွားတဲ့အခါ အစိမ်းရင့်ရင့်တောက်တောက်လေးတွေဖြစ်သွားပြီး သိပ်လှတဲ့ ပုံရိပ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
အရင်ကတွေးထားတာတော့ Northern Light သွားကြည့်တဲ့အခါ ဖြူဖြူဖွေးတဲ့နှင်းတောထဲ ချောကလက်ခွက်ပူပူလေးကိုင်ပြီး ကောင်းကင်မှာကနေတဲ့ ဥတ္တရအလင်းတန်းလေးကို အေးအေးဆေးဆေး ငေးကြည့်မယ်ပေါ့။ တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ ကမ္ဘာပျက်နေတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။
Northern Light က ပေါ်တာရှားသလို ပေါ်ရင်လည်း အမြဲပေါ်နေတာမဟုတ်တော့ ပေါ်တုန်းလေးကို ဓာတ်ပုံတွေ အသည်းအသန် လုရိုက်ကြရတာပါ။ ညကြီးသန်းခေါင် မှောင်မဲသဲနေတဲ့ နေရာမှာ ကင်မရာတွေ Tripod တွေထောင်ရ Setting ချိန်ရတာလည်း ထင်သလောက်မလွယ်ပါဘူး။ ရိုက်နေကြမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ကိုယ်တော့ စိတ်မရှည်လို့ ဖုန်းနဲ့ရိုက်ကြည့်တာ အဆင်ပြေနေလို့ ဖုန်းပဲရိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ Night Mode ရိုက်လို့ရတဲ့ ကင်မရာကောင်းတဲ့ဖုန်းဖြစ်ဖိုကတော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
အပူချိန်ကလည်း အနှုတ်ပြနေတော့ အေးလွန်းလို့ လက်အိတ်ချွတ်လိုက်ရင် လက်တွေကျင်တက်၊ နားတွေပါကိုက်၊ နှာရည်တွေပါကျပါတယ်။ လေကလည်း တစ်နာရီမိုင်၇၀ ကျော်နှုန်း အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့တိုက်နေပါသေးတယ်။ အရှိန်ပြင်းလွန်းလို့ ကိုယ်လို ကိုယ်လုံးထွားတဲ့လူပါ လွင့်လွင့်ထွက်နေတာပါ။ ဖုန်းကိုဆို မနည်းငြိမ်အောင်ကိုင်ရပါတယ်။ အခုလိုပုံတွေကို Tripod မပါဘဲ ဖုန်းနဲ့ရိုက်ဖို့ဆိုတာတော်တော့်ကိုမလွယ်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ပုံလေးတွေ မဆိုးလို့တော်ပါသေးတယ်။
Northern Light ဓာတ်ပုံရိုက်နည်း
Northern Light ဓာတ်ပုံရကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရိုးရိုးကင်မရာနဲ့ ရိုက်လို့မရပါဘူး။ DSLR တို့ Mirrorless Camera တို့လို Setting ပြောင်းလို့ရတဲ့ ကင်မရာနဲ့မှ ရမှာပါ။ Wide lens နဲ့ဆိုပိုကောင်းပါတယ်။ Tripod လည်းလိုပါမယ်။ ဘက်ထရီအပိုလည်း လိုလိုမယ်မယ်ဆောင်ထားပါ။ အမှောင်ထဲ ခြေမချော်အောင်နဲ့ လူကိုပါရိုက်ရင် အလင်းရောင်ရအောင် ဓာတ်မီးလည်းလိုပါမယ်။ Headlight ဆို လက်မှာကိုင်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။
ရိုက်ရမယ့် ကင်မရာ Setting ကတော့…
ISO – 800-1600
Aperture – 3.5 နဲ့ အောက်
Exposure 10-20 စက္ကန့်နဲ့
Focus က Manual ပါ။
Timer ပေးပြီးရိုက်ရင် Handshake မဖြစ်တော့ပါဘူး။
အဲ့လို ကင်မရာတွေမဟုတ်ဘဲ နောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်းတွေနဲ့ဆိုလည်း ကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ Night Mode နဲ့တော့ ရိုက်ရမှာပါ။ Exposure ကြာကြာချိန်နိုင်တဲ့ Manual setting နဲ့ ရိုက်နိုင်တဲ့ ဖုန်းတွေဆိုလည်း ဖုန်းနဲ့တင် အဆင်ပြေနေပါပြီ။ နုမြတ်ပုံတွေဆိုရင် Iph 11 Max Pro ရယ်၊ Galaxy Note 10 ရယ်နဲ့ ရိုက်ထားတာပါ။ Tripod တောင်မပါပါဘူး။ လက်နဲ့ကိုင်ရိုက်ထားတာပါ။
Aurora Show in Perlan Museum Photo – Perlan Museum
Northern Light ကြည့်မယ့်သူတွေ ဒီအချက်လေးတွေ သတိထားပါနော်။
☑️အနွေးထည်ထူထူလိုပါမယ်။ နုမြတ်ကတော့ Uni Qlo က Heattech အင်္ကျ ီနှစ်ထပ်ပေါ် လေကာအင်္ကျီထပ်ဝတ်ထားပြီး ဘောင်းဘီကိုလည်း ဂျင်းဘောင်းဘီအောက် Heattech Stocking ခံဝတ်ထားပါတယ်။ နားလုံတဲ့ သိုးမွှေးဦးထုပ်နဲ့ လက်အိတ်ထူထူလည်း လိုပါလိမ့်မယ်။ နားမလုံရင် နားထဲလေတိုးလို့ balance တောင်မမှန်တဲ့ အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။
☑️နုမြတ်တို့ သွားခဲ့တဲ့ကားက ၁၂ယောက်လောက်ဆန့်တဲ့ ကားပါ။ လူအများကြီးပါတဲ့ ဘတ်စ်ကားတွေလည်း တခြား Tour တွေကနေ ထွက်ပါတယ်။ ကားသေးလေ ဈေးပိုကြီးလေပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကားသေးတွေက ကားကြီးတွေက ဝင်မရတဲ့ လမ်းကိုဝင်နိုင်လို့ Northern Light ရှာပုံတော် ဖွင့်ရာမှာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ကားကြီးတွေက လမ်းမကြီးဘေးမှာပဲ ကပ်ရပ်ကြရတာဆိုတော့ ကားတွေဖြတ်သွားတဲ့အခါ ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာ သိပ်မကောင်းပါဘူး။
☑️Northern Light အလှကို အပြင်မှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျခံစားသလို သူများရိုက်ထားပြီးသားအသင့်ကို အရုပ်ရောအသံနဲ့ပါခံစားကြည့်လိုက်ပါ။ Reykjavik မြို့ထဲက Perlan ပြတိုက်မှာ Aurora Show ရှိပါတယ်။ အမိုးခုံးခန်းမကြီးမှာ အမိုးအပြည့် Screen ကြီးထဲ Iceland နိုင်ငံအနှံ့ရိုက်ထားတဲ့ Northern Light Video ကို ကြည့်ရတာ တကယ်ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ သီချင်းတွေရော ရိုက်ချက်တွေရော ကောင်းလွန်းလို့ အပြင်မှာ ကိုယ်တိုင်ကြည့်နေရသလို ခံစားရပါတယ်။ Northern Light ဖြစ်ပေါ်လာပုံတွေရော ဒဏာရီပုံပြင်တွေပါ ရှင်းပြထားတာ တစ်ချက်မှ မပျင်းရပါဘူး။ အဲ့ Show ကို သွားကြည့်ဖို့တော့ Recommend ပေးပါတယ်။
☑️ မြို့ထဲမှာ Aurora Reykjavikဆိုတဲ့ ပြတိုက်လည်းရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ကိုတော့ မရောက်ခဲ့ရလို့ သေချာမသိပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားရင် သွားကြည့်လို့လည်း ရပါတယ်နော်။
ဒါကတော့ ဥတ္တရအလင်းတန်းလို့ခေါ်တဲ့ Northern Light (Aurora) အကြောင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ တကယ်သွားကြည့်မယ့်သူတွေအတွက် လိုအပ်မယ့် အချက်အလက်တွေကို သိသလောက် ပြောပြထားတာပါ။ ဗဟုသုတ တစ်ခုခုရရှိသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Northern Light အလှကို အားလုံးမြင်ရအောင် အင်တာနက်က ပုံလေးတွေကိုပါ ရှာထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကြိုက်ရင် Like နဲ့ Share လုပ်ပေးပါဦးနော်။ နောက်ထပ်လည်း စိတ်ဝင်စားစရာနေရာတွေ အကြောင်းအရာတွေ တင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာပါ…
August 20, 2019 April 20, 2021 Posted in Adventure, Asia, Travel, UncategorizedTagged adventure, Asia, food, laos, Nature, TravelLeaveacomment
ကိုယ်တွေရဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံလေး လာအိုဟာ နီးရက်နဲ့ဝေးနေတဲ့ နိုင်ငံလေးပါ။ သူ့ဆီ မြန်မာနိုင်ငံကနေ တိုက်ရိုက်လေကြောင်းလိုင်းမရှိတော့ လွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့မရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့။ လာအိုကိုသွားချင်ရင် တခြားနိုင်ငံကနေတဆင့်သွားမှ ရမှာပါ။ များသောအားဖြင့် ထိုင်းကနေ တဆင့်သွားကြပါတယ်။
ထိုင်းကနေ လာအိုဆီ လေယာဉ်နဲ့သွားနိုင်သလို ရထားရယ်၊ ကားရယ်နဲ့လည်းသွားလို့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်ကနေ ညအိပ်ရထားစီးပြီး လာအိုနိုင်ငံကိုသွားခဲ့တာပါ။ ဘန်ကောက်ရောက်တုန်း လာအိုဘက်ပါ သွားလည်မယ်ဆိုပြီး လာအိုမြို့တော်ဗီယန်ကျင်းမြို့နဲ့ Adventure တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတဲ့ သဘာဝမြို့လေး ဗန်ဗီယန်းမြို့ကို သွားလည်ခဲ့တာပါ။
ဘန်ကောက်ကနေ လာအိုကို ရထားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင် ထိုင်း-လာအိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့ နွန်းခိုင်မြို့(Nong Khai) ကနေတဆင့် သွားမှရမှာပါ။ Bangkok – Nong Khai ရထားလက်မှတ်ကို ဘန်ကောက်မြို့ထဲက Hua Lumpong ဘူတာကြီးမှာ သွားဝယ်ရပါတယ်။ နုမြတ်တို့ကတော့ အဲ့တုန်းက Baiyoke Sky မှာတည်းတော့ ဟိုတယ်ဘေးက Travel Agent မှာ ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။
နွန်းခိုင်သွားတဲ့ ရထားတွေထဲမှာ ညအိပ်စင်ပါတဲ့ ညရထား၂မျိုးရှိပါတယ်။ ည ၈နာရီထွက်တဲ့ Special Express အမျိုးအစား Number 25 က ပိုကောင်းပြီး ပိုသန့်ပါတယ်။ အဲ့ရထားလက်မှတ် မရှိတော့လို့ ည၈း၄၅ ထွက်တဲ့ Rapid အမျိုးအစား Number 133 ကိုပဲ စီးခဲ့ရပါတယ်။
ည၈နာရီထွက်တဲ့ ရထားမှာ ၂ယောက်သီးသန့် အိပ်ခန်း 1st Class ရှိပြီး အပေါ်ခုံ ၁၁၅၇ဘတ် (၄၆၀၀၀ကျပ်) အောက်ခုံ ၁၃၅၇ဘတ် (၅၄၀၀၀ကျပ်) ကျသင့်ပါတယ်။ 2nd class ကတော့ အိပ်စင်ပါတဲ့ ဘုံအခန်းဖြစ်ပြီး အပေါ်ခုံ ၇၄၈ဘတ်(၃၀၀၀၀ကျပ်) အောက်ခုံ ၈၃၈ဘတ် (၃၃၅၀၀ ကျပ်)ပါ။ အဲကွန်းပါပါတယ်။
ည၈း၄၅ထွက်တဲ့ရထားမှာတော့ အဲကွန်းပါတဲ့ 2nd Class အိပ်စင်ဘုံခန်းက အပေါ်ခုံဆို ၆၁၈ဘတ်(၂၅၀၀၀ကျပ်) နဲ့ အောက်ခုံဆို ၆၈၈ (၂၇၅၀၀ကျပ်) ဘတ်ပါ။ အဲကွန်းမပါတဲ့ ထိုင်ခုံတွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ 2nd Class ဆို ၃၄၈ဘတ် (၁၄၀၀၀ကျပ်) နဲ့ 3rd Class ဆို ၂၁၃ ဘတ် (၈၅၀၀ကျပ်) ပဲကျမှာပါ။
နုမြတ်တို့ သွားခဲ့တာက ၃ယောက်ဆိုတော့ 2nd Classမှာ အောက်၂ခုံ ပေါ်တစ်ခုံ ယူလိုက်ပါတယ်။ ၁ဘတ်ကို ၄၀ကျပ်နဲ့ တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်ခုံက ၂၅၀၀၀ ကျပ်နဲ့ အောက်ခုံက ၂၇၅၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်လောက်ကျသင့်မှာပါ။
Hua Lumpong ဘူတာကြီးဆီကို မြို့ထဲ Pratunam ဝန်းကျင်ကနေသွားမယ်ဆိုရင် ၁၀မိနစ်လောက်ပဲကြာပါတယ်။ ၁နာရီကျော်လောက် ကြိုအရောက်သွားပြီး ကိုယ့်ရထားတွဲကို သေချာရှာပြီး ခုံတွေမှာနေရာချရပါမယ်။ ရထားပေါ်တက်တက်ချင်း ရိုးရိုးထိုင်ခုံတွေလိုပါပဲ။ ရထားမောင်းပြီး ခဏအကြာမှာမှ အိပ်ယာလာပြင်ပေးပါတယ်။ အိပ်စင်က အပေါ်နဲ့ အောက် ၂ဆင့်လိုဖြစ်ပြီး အပေါ်တက်ဖို့ လှေကားလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။သဘောကျတာလေးတစ်ခုက ပြတင်းပေါက်ဘေးတင်မဟုတ် လျှောက်လမ်းဘေးမှာပါ လိုက်ကာလေးတွေ ကာပေးထားတော့ ကိုယ်အိပ်တဲ့အခါမှာ Privacy ရှိတာကိုပါ။
ရထားက ည၈နာရီရထားလောက်တော့ မသန့်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲကွန်းခန်းနဲ့ဆိုတော့ သူ့ဟာနဲ့ သူတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ Luggage တွေပါလာရင်လည်း ကိုယ့်အိပ်စင်နားမှာ ထားလို့ရတယ်။ ဖုန်းအားသွင်းဖို့ အပေါက်လည်းပါပါတယ်။ အိမ်သာကတော့ ဘုံအိမ်သာပေါ့။ ရေချိုးခန်းမပါပေမဲ့ ဘေစင်တော့ပါတယ်။ ရထားက အရမ်းမလှုပ်တော့ အိပ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်။
ရထားပေါ်မှာ ကိုယ်တွေဆီမှာလိုပဲ မနက်စောစောမှာ ဈေးသည်တွေတက်ရောင်းပါတယ်။ မနက်မှာလာရောင်းတဲ့ ကြက်ကင်နဲ့ ကောက်ညှင်းကောင်းမှကောင်းပဲ။ ကြက်ကင်အကြီးကြီး တစ်ကောင်လုံးမှ ဘတ်၆၀ပဲပေးရတယ်။ အရမ်းအရသာရှိတာပဲ။ သွားဖြစ်ရင် ဝယ်စားကြည့်နော်။
မနက် ၈း၃၅မှာ နွမ်းခိုင်မြို့ဘူတာကို ရောက်ပြီး ဘူတာကနေ ထိုင်းနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်ဆီ တုပ်တုပ် ၁၀မိနစ်လောက်စီးသွားရပါတယ်။ ထိုင်း Immigration Gate ကနေ Passport ပြပြီးထွက်ကာ ထိုင်း-လာအို ချစ်ကြည်ရေးတံတားဖြတ်သွားရပါတယ်။ ဒီတံတားဖြတ်ဖို့ ဘတ်စ်ကားတွေရှိပါတယ်။ ၅မိနစ်လောက် မောင်းရပြီး တစ်ယောက်ကို ဘတ်၂၀ ပေးရပါတယ်။ မြစ်တစ်ဖက်ရောက်တဲ့အခါ လာအို Immigration Gate ကိုဖြတ်ပြီး လာအိုကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ လာအိုနိုင်ငံတွင်း ဝင်ရောက်ဖို့ Passport ပဲလိုပြီး Visa မလိုပါဘူး။
သတိထားရမှာကတော့ လာအိုကနေ ထိုင်းကိုပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင် ကုန်းလမ်းကဝင်ရင် ထိုင်းဗီဇာလိုပါလိမ့်မယ်။ လေကြောင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ မလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့် လာအိုအသွားကို ကြိုက်သလို သွားလို့ရပေမဲ့ လာအိုကနေအပြန်ကတော့ လေယာဉ်ပျံနဲ့ဲပြန်တာပိုကောင်းမှာပါ။ ကုန်းကြောင်းက ပြန်ရင်လည်း ထိုင်းဂိတ်မှာ Re-entry Visa ပြန်လျှောက်ရင်ရပါတယ်။ ဘတ်၁၀၀၀ (၄၀၀၀၀ကျပ်) လောက်တော့ကျပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တွေကတော့ အပြန်ကို လေယာဉ်နဲ့ပဲပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Bangkok Transit ဖြစ်ပေမဲ့ ထိုင်းထဲမဝင်တော့ဘဲ ရန်ကုန်တိုက်ရိုက် ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
လာအိုနိုင်ငံ Immigration ကိုကျော်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ လာအိုနိုင်ငံတွင်းမြို့အသီးသီးဆီသွားလို့ရတဲ့ ကားဂိတ်တွေ တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေ ဗန်ဗီယန်းမြို့ကို ကားဂိတ်ကနေ တန်းသွားခဲ့ကြတာပါ။ နယ်စပ်ဂိတ်ကနေ ဗန်ဗီယန်းမြို့ကို ကားနဲ့ ၄နာရီလောက်ပဲမောင်းရပြီး ကားခ တစ်ယောက်ကို မြန်မာငွေ၈၀၀၀ကျပ်လောက်ပဲ ကျပါတယ်။ မြို့တော် ဗီယန်ကျန်းကိုဆိုရင် နာရီဝက်လောက်ပဲကြာမှာ ဖြစ်ပြီး လောင်ပရာဖန်ကို တန်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ၈နာရီကြာမှာပါ။ နုမြတ်တို့ကတော့ ဗန်ဗီးယန်း မြို့ကို အရင်သွားခဲ့တယ်။ အပြန် ဗီယန်ကျင်းကနေ လေယာဉ်နဲ့ပြန်မှာဆိုတော့ စိတ်ချရအောင်ပေါ့။
Van Vieng မြို့
ဗန်ဗီယန်းက တကယ်တော့ တောတောင်တွေ ဝန်းရံနေတဲ့ နယ်မြို့သေးသေးလေးပါ။ မြို့ထဲမှာလမ်းဆိုလို့ လမ်းသုံးလမ်းရယ်၊ ဈေးရယ်၊ အဝေးပြေးဂိတ်ရယ်ပဲရှိလို့နေတာပါ။ ထူးခြားတာကတော့ အဲ့ဒီ နယ်မြို့သေးသေးလေးမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေ ပြည့်နေတာကိုပါ။ အထူးသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ ကိုရီးယားတွေ အလာများပါတယ်။ ဧည့်လာများတဲ့မြို့ဖြစ်တော့ ဒေသခံတွေထက်တောင် ဧည့်သည်က ပိုလို့တောင်များနေပါတယ်။ မြို့ထဲဘာမှသိပ်မရှိပေမဲ့ အကောင်းစား ဟိုတယ်ကြီးတွေ၊ Resort တွေ၊ တည်းခိုခန်းတွေ၊ Backpacker တွေအတွက် Hostel အဆောင်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ဘားတွေနဲ့ ပြည့်လို့နေပါတယ်။
ဗန်ဗီယန်းကို ဧည့်သည်တွေလာကြတဲ့ အဓိကအချက်ကတော့ တောတောင်မြစ်ချောင်း သဘာဝတရားတွေကြောင့်ပါ။ ဧည့်သည်တွေက မြို့ကို ဖြတ်စီးနေတဲ့ နမ်ဆန်မြစ်ထဲ Kayak လှေလှော်ကြတယ်။ Tubing လို့ခေါ်တဲ့ ဘောကွင်းပေါ်ထိုင်ပြီး ရေစီးကြောင်းအတိုင်း မြောကျတယ်။ ဂူတွေထဲစီးဝင်နေတဲ့ ဂူအောက် မြစ်ထဲ ဘောကွင်းစီးကြတယ်။ ရေပြာအိုင်တွေထဲ ရေစိမ်ကြပြီး ရေပြာအိုင်ပေါ်အုပ်မိုးနေတဲ့ သစ်ပင်ရဲ့ သစ်ကိုင်းတွေပေါ်ကနေ ရေပြာအိုင်ထဲ တဗွမ်းဗွမ်းနဲ့ ခုန်ဆင်းကြတယ်။ ကျောက်တောင်တွေတက်ကြတယ်။ ကျောက်ဂူတွေထဲဝင်ကြတယ်။ စပါးခင်းတွေထဲလမ်းလျှောက်ကြတယ်။ စက်ဘီးလေးတွေ ဆိုက်ကယ်တွေကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး ဟိုဒီလျှောက်သွားကြတယ်။ သစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်ကြား Zipline တွေစီးကြတယ်။ မြစ်ကမ်းစပ်ကတဲလေးတွေမှာ အကင်တွေစားပြီး လေညှင်းခံကြတယ်။ သဘာဝတရားထဲ သဘာဝအတိုင်းပျော်မွေ့နိုင်ကြလို့ လူငယ်တွေ တအားကြိုက်ကြပါတယ်။
ညဘက်ဆိုလည်း မြို့ထဲဘားတွေ၊ ကလပ်တွေမှာ လူစည်လွန်းလို့ လူငယ်တွေပျော်မွေ့ရာ ပါတီမြို့၊ ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးထဲလွယ်ပြီးလျှောက်သွားကြတဲ့ လူငယ်တွေအလာများလို့ Backpacker မြို့၊ စွန့်စွန့်စားစားအရာတွေ လုပ်လို့ရလို့ Adventure မြို့လေး အဖြစ် လူသိများပါတယ်။
နုမြတ်တို့ ဗန်ဗီယန်းမြို့လေးကို ညနေလောက်ရောက်တာဆိုတော့ ဟိုတယ်မှာ Check In ဝင်ပြီး အလင်းရောင်ရှိတုန်း မြို့ထဲ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လျှောက်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်တွေတည်းတာ Grandview Riverside Hotel ပါ။ နာမည်က အပျံစားဖြစ်ပေမဲ့ မိုတယ်အဆင့်လောက်ပါပဲ။ မြစ်ကမ်းဘေး ၃ယောက်ခန်းကို US$ ၅၀ ကျော်လောက်ပဲကျတယ်ဆိုတော့လည်း သူ့ဈေးနဲ့သူ မဆိုးဘူးပြောရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဟိုတယ်ထဲဝင်ရင် ဖိနပ်ချွတ်ဝင်ရတာကတော့ တော်တော်မနိပ်ပါဘူး။ ဟိုတယ် Location ကောင်းလို့ရယ် Website က ပုံလေးတွေက မဆိုးတော့လည်း ရွေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဟိုတယ်ကမြစ်ဘေးတင်ဆိုတော့ မြစ်ထဲကရှုခင်းတွေကိုလည်း လှမ်းမြင်ရတာပေါ့။တောတောင်တွေနောက်ခံနဲ့ မြစ်ရှုခင်းကတော်တော်သာယာပါတယ်။ မြစ်ထဲမှာလည်း Speed Boat စီးတဲ့သူတွေ Kayak လှေလှော်သူတွေနဲ့ ပြည့်နေတာ။ မြို့ထဲစနည်းနာပြီး နောက်နေ့အတွက် Tour တွေစုံစမ်းနေတာနဲ့ နေဝင်ချိန်ကိုတောင်မခံစားလိုက်ရဘူး။ ဟိုရောက်ရင်လည်ပတ်ဖို့ စိတ်မပူနဲ့။ ဟိုတယ်ကထွက်လိုက်တာနဲ့ လမ်းဘေးဝဲယာမှာ Tour Agent တွေ တပုံကြီး။ ကြိုက်တဲ့ Activities လုပ်ဖို့ ကြိုက်တာရွေးဝယ်လို့ရတယ်။ နောက်နေ့ နေ့တဝက်နေမှာဆိုတော့ Half Day Tour ဝယ်လိုက်တယ်။ အဲ့ညမှာတော့ မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကို ဝါးတံတားလေးနဲ့ကူးပြီး မြစ်ဘေးက တဲလေးတွေမှာ အကင်စားပြီး အေးဆေးလေညှင်းခံခဲ့ကြတယ်။ တဲတွေမှာ လင်းထိန်နေပြီး သီချင်းတွေအကျယ်ကြီး ဖွင့်ထားတာ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ မြစ်ကမ်းဘေးမှာတော့ တချို့က မီးပုံးပျံတွေ လွှတ်တဲ့သူကလွှတ်ပေါ့။
နောက်တစ်ရက်မှာတော့ ဟိုတယ်ကို Tour က ကားနဲ့လာခေါ်ပြီး Activities တွေလုပ်မယ့်နေရာကို ပို့ပေးပါတယ်။ စစချင်း Cave Tubing လို့ခေါ်တဲ့ ဂူထဲဘောကွင်းစီးဝင်ခဲ့တယ်။ ဘောကွင်းပေါ်ထိုင်ပြီး ဂူအောက်မြစ်ထဲ ရေစီးအတိုင်းဝင်ရတာ။ မှောင်ထဲမဲထဲဆိုတော့ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့တော့ကောင်းတာပေါ့။ ရေဆုံးတဲ့အခါ ဂူထဲ လမ်းလျှောက်ဝင်ရတယ်။ အစအဆုံးစီးရမယ်ထင်ပြီး ဖိနပ်ချွတ်ထားခဲ့မိတော့ ခြေထောက်တွေ အသေစူးပေါ့။အချိန်ရရင် မြစ်ထဲလှေလှော်တဲ့ Kayaking ပါလုပ်မယ့်ဟာကို မလုပ်လိုက်ရဘူး။ Cave Tubing မှာ ခေါင်းမှာတပ်ရမယ့် Headlight ကို သွားယူနေတာကို အကြာကြီးစောင့်နေရလို့ မလုပ်လိုက်ရတာ။
Blue Lagoon လို့နာမည်ကြီးတဲ့ ရေပြာအိုင်ရောက်ဖို့ ကားနဲ့နည်းနည်းသွားရတယ်။ ရေကတော့ တကယ်ပြာပါတယ်။ ပြာလဲ့နေတာ။ အေးလည်းအရမ်းအေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက ကားပါကင်ဘေးတင်ရှိတာဆိုတော့ အိုင်ဘေးပတ်လည်ကနေလူတွေထိုင်ပြီး ကြည့်နေကြတာ။ ရေပြာအိုင်ထဲကို သစ်ကိုင်းပေါ်ကနေခုန်ချတာကို အားပေးနေကြတာလေ။ မသိရင် ပွဲကြည့်နေသလိုပဲ။ ခုန်ချပြီးတာနဲ့ လက်ခုပ်တွေဝိုင်းတီးကြတာ။ သစ်ကိုင်းက ၂ဆင့်ရှိတယ်။ အပေါ်တဆင့်က တော်တော်မြင့်တယ်။ ရောက်လက်စနဲ့မထူးဘူးဆိုပြီး အားတင်းပြီး ခုန်ချခဲ့သေးတယ်။
ရေပြာအိုင်ထဲမှာ ဒန်းလိုမျိုးတွေလည်း လုပ်ထားသေးတယ်။ ကန်ဘေးကနေ ကြိုးတွေခုန်ပြီး ခုန်ချတာမျိုးလည်းလုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူအရမ်းရှုပ်လို့ အေးဆေးမနေရပါဘူး။ နောက်ထပ်ရေပြာအိုင်တစ်ခုကတော့ ပိုကြီးတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ အချိန်မရှိတော့ ဒီမှာပဲ ရေဆော့ခဲ့ရတယ်။ မြို့ထဲပြန် Lunch စားပြီးတော့ Vientiane ကို ကားနဲ့ဆက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ကားတွေက Hi Ace လိုကားမျိုးတွေမှာ တခြားလူတွေနဲ့ လိုက်စီးရတာပါ။ ကား ၄နာရီလောက်မောင်းရပါတယ်။
မြို့တော် ဗီယန်ကျင်း(Vientianne) ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်နားရှိ မဲခေါင်မြစ်ကမ်းမှာရှိပြီး စန္ဒကူးမြို့တော် (သို့) လမြို့တော်လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ၂၀၁၅ခုနှစ် စစ်တမ်းများအရ လူဦးရေ ၇သိန်း၆သောင်းကျော်ပဲရှိတဲ့ မြို့လေးပါ။ ကျွန်မတို့ရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ ရန်ကုန်မှာ လူဦးရေ ၇သန်းကျော်ရှိတာဆိုတော့ ရန်ကုန်နဲ့ယှဉ်ရင် ၁၀ပုံ ၁ပုံလောက်ပဲရှိပါတယ်။
သမိုင်းတလျှောက်မှာ ဗီယန်ကျင်းမြို့က တစ်ချိန်က မြို့ပျက်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၁၇၀၇ ခုနှစ်က လာအိုမင်းနေပြည်တော်ရဲ့ မြို့တော်အဖြစ်စတင်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပေမဲ့ ၁၈၂၇ခုနှစ်မှာ ထိုင်းလူမျိုးတို့ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ပြီး ဖျက်စီးခဲတာကြောင့် မြို့ပျက်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ၁၈၉၃ခုနှစ်မှာ လာအိုနိုင်ငံ ပြင်သစ်ကိုလိုနီလက်အောက်ကျရောက်ပြီးနောက် ၁၈၉၉ခုနှစ်ရောက်မှ လာအိုနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်အဖြစ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတာပါ။ ပြင်သစ်ကိုလိုနီလက်အောက်ကျရောက်ခဲ့ဖူးလို့ အဆောက်အအုံတချို့က ပြင်သစ်ဗိသုကာလက်ရာတွေဖြစ်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဗီယန်ကျင်းမြို့ရောက်ရင် မသွားမဖြစ်နေရာအဖြစ် အကျော်ကြားဆုံးကတော့ မြို့ထဲကနေ ၁နာရီလောက်မောင်းရတဲ့ Buddha Park (ဗုဒ္ဓပန်းခြံ) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၅၈ခုနှစ်က လာအိုဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဦးဆောင်ပြီး ပန်းခြံထဲမှာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ရုပ်တုပေါင်း ၂၀၀ကျော် ထုဆစ်ထားရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဇာတ်နိပါတ်တော်တွေထဲက နတ်ဘုရားရုပ်တုတွေကို ထုဆစ်ထားရှိရာမှာ ၄၀မီတာအမြင့်ရှိတဲ့ လျောင်းတော်မူဘုရား၊ အဝင်ဝနားရှိ ဖရုံသီးသဏ္ဏာန် ၃ထပ်အဆောက်အအုံ၊ ဦးခေါင်းသုံးလုံးပါ ဆင်နတ်ဘုရား၊ ဦးခေါင်း ၁၂လုံးပါနတ်ဘုရားစတဲ့ ရုပ်တုတွေက ထင်ရှားပါတယ်။
မြို့ထဲရှိ ထင်ရှားတဲ့အဆောက်အအုံတစ်ခုကတော့ Patuxai Victory Monument မော်ကွန်းတိုင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ရှိ နာမည်ကျော် Arc de Triomphe မော်ကွန်းတိုင်နဲ့ဆင်ပြီး ဟိန္ဒူနတ်ဘုရားရုပ်တွေနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားတဲ့ လာအိုဗိသုကာလက်ရာတွေကိုပါ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ စစ်ပွဲများမှာ ကျဆုံးခဲ့သူများကို ရည်စူးပြီး ဆောက်လုပ်ထားရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လာအိုက ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အလျှောက် မြို့တော်ဗီယန်ကျင်းမှာ ဖူးမြော်စရာ ဘုရားစေတီတွေများစွာရှိပါတယ်။ တန်ခိုးအကြီးဆုံး နာမည်အကြီးဆုံးကတော့ That Luang စေတီပါ။ ရွှေရောင်လွှမ်းနေတဲ့စေတီက လာအိုဗိသုကာလက်ရာနဲ့ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လာအိုနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရအဆောက်အအုံအဖြစ်လည်း ထင်ရှားပါတယ်။
အခုလက်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရှိ နာမည်ကျော် မြဘုရားဆင်းတုကို အပူဇော်ခံထားရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီး Wat Ho Phra Keo ကတော့ မြို့ထဲမှာရှိပြီး လှပတဲ့ ရိုးရာဗိသုကာလက်ရာတွေကြောင့် ကျော်ကြားပါတယ်။ မြဘုရားဆင်းတုကို ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကနေ လာအိုဘုရင်သိမ်းပိုက်ခဲ့စဉ်တုန်းက ထားရှိကိုးကွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း ထိုင်းစစ်တပ်က ပြန်လည်ပင့်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ကျော်က ဘုရားကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ရာမှာ ယာဇ်အပူဇော်ခံခဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး ဆီမောင်းကို အစွဲပြုပြီး မှည့်ခေါ်ခဲ့တဲ့ Wat Si Muang ကျောင်းဆောင်ကလည်း ဘုရားဖူးသူတွေနဲ့ စည်ကားနေပါတယ်။
ထိုင်းကျူးကျော်ခဲ့စဉ်တုန်းက မပျက်စီးခဲ့တဲ့ တစ်ခုတည်းသောကျောင်းဆောင် Wat Si Saket ကတော့ နှစ်ပေါင်း၂၀၀နီးပါးသက်တမ်းရှိပြီး မြို့ထဲသမ္မတအိမ်တော်ရာနားမှာရှိကာ ဗုဒ္ဓဆင်းတုငယ်ပေါင်း အရွယ်စုံ ပုံစံစုံ ၆၈၀၀ကျော်ရှိလို့ ထင်ရှားပါတယ်။
Vientiane မြို့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ မြို့ထဲက Khampiane Boutique Hotel မှာ Check in ဝင်ပြီး အနီးအနားက ဘုရားတွေဆီလမ်းလျှောက်သွားကြည့်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ညနေစောင်းပြီဆိုတော့ ဘုရားတွေပိတ်နေပါပြီ။ လမ်းမှာလည်း လူတွေတအားရှင်းတာပဲ။ ကားဌားဖို့ Taxi လည်းမတွေ့။ တုပ်တုပ်လည်းမတွေ့။ လာအိုမြို့တော်ဖြစ်ပြီး လူရှင်းလိုက်တာလို့တောင် တွေးမိသေးတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ လမ်းအတော်လျှောက်ပြီးတဲ့အခါ တုပ်တုပ်တစ်စီးရပ်ထားတာတွေ့တာနဲ့ ဌားပြီး ကမ်းနားက ညဈေးထွက်ခဲ့တယ်။ ညဈေးနားမှာတော့ ကားတွေရော လူတွေရော စည်လို့ရယ်ပေါ့။ ထိုင်းက အဝတ်အစားတွေများပေမဲ့ ဈေးသက်သာတော့ ဝယ်ပျော်ပါတယ်။ နောက်တနေ့မှာတော့ နေ့တဝက်စာ ကားဌားထားပြီး မြို့ထဲကနေ ၁နာရီလောက်မောင်းရတဲ့ Buddha Park ရယ် လာအိုနိုင်ငံရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး That Luang စေတီရယ် Victory Monument ရယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘန်ကောက်ကို ထွက်တဲ့ Air Asia လေယာဉ်ချိန်က နေ့လည်၁း၄၅ဆိုတော့ နေ့လည်စာစားပြီး လေဆိပ်ထွက်ကာ ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုယ်တွေသွားတုန်းကတော့ အချိန်မရှိလို့ တစ်မြို့ကိုတစ်ညနှုန်းနဲ့ နှစ်ညအိပ် နှစ်မြို့သွားခဲ့တယ်။ အချိန်ရရင်တော့ ၄ညအိပ်လောက်သွားသင့်တယ်။ အချိန်ပိုရရင်ရင်တော့ ၆ရက်လောက်နေပြီး လောင်ပရာဘန်မြို့ပါဆက်သွားလို့ရပါတယ်။ေ လာင်ပရာဘန်မှာဆိုလည်း လည်စရာ ရေတံခွန်တွေ၊ တောင်တွေရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခါသွားဖြစ်ရင်တော့ လောင်ပရာဘန်ပါရောက်အောင်သွားရမယ်။
ကုန်ကျစားရိတ်က ဘန်ကောက်ကနေ ရထားနဲ့သွား လေယာဉ်နဲ့ပြန်ခဲ့တာဆိုတော့ အားလုံးတွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ၂ညအိပ်ခရီးကို မြန်မာငွေ ၂သိန်းခွဲလောက်ပဲကျခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းမှာ ထိုင်းဘတ်သုံးခဲ့ပြီး လာအိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ လာအိုပိုက်ဆံ Kip ကို သုံးခဲ့ပါတယ်။ လာအိုပိုက်ဆံ 1000 Kip က မြန်မာငွေ 163ကျပ်နဲ့ ညီမျှပါတယ်။
လာအိုအစားအစာက ထိုင်းမြောက်ပိုင်းအစာနဲ့ဆင်ပါတယ်။ Larb လို့ခေါ်တဲ့ အသားစင်းကောကို အရွက်တွေနဲ့ သုတ်ထားတဲ့ဟင်း၊ သင်္ဘောသီးထောင်း၊ ငါးပေါင်း၊ ကြက်ကင် စတာတွေကို ကောက်ညှင်းနဲ့တွဲစားလေ့ရှိပါတယ်။ ကောက်ညှင်းလေးကို လက်နဲ့ဖဲ့ပြီး အလုံးသေးသေးကျစ်ကျစ်လေးဖြစ်အောင် လုံးပြီးမှ ဟင်းတွေနဲ့တွဲစားတာပါ။ ပြင်သစ်လက်အောက်ရောက်ခဲ့တော့ ပြင်သစ်စာဖြစ်တဲ့ ပေါင်မုန့်လုံးလုံးရှည်ရှည်ထဲ အသားတို့ ဝက်ပေါင်ခြောက်တို့ကို အရွက်တွေ ရောညှပ်စားတဲ့ Baguette ဟာလည်း လာအိုလမ်းဘေးအစားအစာအဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။
လာအိုက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရာသီဥတုဆင်တော့ လာအိုနိုင်ငံဆီ သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်က နိုဝင်ဘာလနဲ့ ဧပြီလအကြား အေးမြတဲ့ရာသီဥတုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ လာအိုအကြောင်း အကြမ်းဖျဉ်းသိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ လာအိုက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံလေးပါ။ သဘာဝအလှတွေနဲ့ အေးချမ်းပါတယ်။ သွားလည်လို့လည်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မကောင်းတာက ကိုယ်တွေရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီထက်ပိုလှတဲ့ ရှုခင်းတွေ၊ ပိုဆန်းကြယ်တဲ့ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်နေရာတွေ၊ ယဉ်ကျေးျွှုအမွေအနှစ်တွေ၊ လူမျိုးစုတွေ ရှိနေရက်နဲ့ ဒီနိုင်ငံသေးသေးလေးနဲ့ ယှဉ်လိုက်တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံခြားခရီးသွားဝင်ရောက်မှုတွေ ပိုနည်းနေတာကိုပါ။ သူတို့ရဲ့ မြို့တော်က ပဲခူးမြို့သာသာလောက်ပဲရှိပြီး ခရီးသွားတွေ အမြဲမပြတ်စည်ကားနေတဲ့ ဗန်ဗီယန်းမြို့ဆိုရင်လည်း ကလောမြို့လေးလိုပါပဲ။ ဒီလို လည်စရာ ၃-၄မြို့ပဲရှိတဲ့ လာအိုက မြန်မာထက် ခရီးသွားပိုများနေတာ တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အဓိကကတော့ Tourist တွေအသွားများတဲ့ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်နဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကနေ ကုန်းကြောင်းကနေ အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာလည်း ကိုယ်တွေရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလှနဲ့ ယဉ်ကျေးအမွေအနှစ်တွေ ကမ္ဘာကျော်လာပြီး ခရီးသွားအများကြီးဝင်ရောက်လာပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းကြီး တိုးတက်လာမယ်လို့တော့ မျှော်လင့်ရတာပဲနော်။
November 2, 2017 April 21, 2021 Posted in Australia, Heritage, Travel, UncategorizedTagged Australia, Nature, TravelLeaveacomment
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မြို့ကြီးများ၌ လူလုပ်ဆိပ်ကမ်း၊ သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ဆိပ်ကမ်းစသဖြင့် ဆိပ်ကမ်းများစွာရှိသည့်အနက် သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့ရှိ ဆစ်ဒနီဆိပ်ကမ်းသည် ကမ္ဘာပေါ်၌ အကြီးဆုံးသဘာဝဆိပ်ကမ်းကြီးပင် ဖြစ်သည်။ တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ်္ဒရာရှိ တက်စမန်ပင်လယ်၏ ရေလက်ကြားတစ်ခု ဖြစ်သည့် ယင်းဆစ်ဒနီဆိပ်ကမ်းသည် မိုင်ပေါင်း ၁၉၇ မိုင်အထိ ရှည်လျားလှပါသည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းဖြစ်သည့်အပြင် သြစတြေးလျတိုက်သို့ ဥရောပနိုင်ငံသားများ ပထမဆုံး အခြေချနေထိုင်ခဲ့သည့် နေရာဖြစ်၍လည်း သမိုင်းကြောင် အရ အရေးကြီးအခန်းကဏ္ဍ၌ ပါဝင်နေပါ၏။ ၁၇၇၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဗြိတိသျှ စစ်ဗိုလ် ဂျိမ်းစ်ကွတ်ခ်ဆိုသူက ဤဆိပ်ကမ်းကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှရေတပ်အရာရှိ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဂျော့ချ်ဂျက်ခ်ဆန်ဆိုသူကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဂျက်ခ်ဆန် သင်္ဘောဆိပ် (Port Jackson) ဟု အမည်ပေးခဲ့ရာ ယနေ့တိုင် အမည်တွင်ဆဲဖြစ်၏။
ဆစ်ဒနီဆိပ်ကမ်းသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် အရေးပါသလို လှပသော ကမ်းခြေများ၊ တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေသော ရေပြင်များ၊ ကမ်းစပ်နှင့် ကျွန်း များပေါ်ရှိ သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများကြောင့်လည်း ပြည်တွင်းပြည်ပဧည့်သည်များနှင့် စည်ကားလျက်ရှိသည့် အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုဖြစ်၍ နေပါသည်။
ဆိပ်ကမ်း၏ အလှအပကို ခံစားရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ဆိပ် ကမ်းတစ်လျှောက်ပြေးဆွဲနေသည့် အပျော်စီး သင်္ဘောများ၌ လိုက်ပါစီးနင်းခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ ဆစ်ဒနီမြို့သို့ အလည်လာသူတိုင်း ဆစ်ဒနီဆိပ်ကမ်း၌သင်္ဘောစီးရင်း အပန်းဖြေလေ့ရှိရာ တစ်နှစ်လျှင် သင်္ဘောအသီးသီး၏ပြေးဆွဲသည့်ခေါက်ရေပေါင်း ၁၅ သန်းမျှ ရှိသည်ဟု သိရ၏။ စာရေးသူ ယခုနှစ် ဧပြီလ၌ ဆစ်ဒနီရောက်ခဲ့စဉ်ကတည်းက ဆစ်ဒနီမြို့၏ အထင်ကရဆိပ်ကမ်းတစ်လျှောက် အပျော်စီးသင်္ဘောစီးဖြစ် ခဲ့ပါ၏။ ဆိပ်ကမ်း၌ အကြီးဆုံးနှင့် အစည်ကားဆုံး သင်္ဘောဆိပ်ဖြစ်သည့် Circular Quay မှ ထွက်သည့် နှစ်ထပ်သင်္ဘောဖြစ်၍ အသွားအပြန်နှစ်နာရီနီးပါးကြာကာ နေ့လယ်စာ ပင်လယ်စာဘူဖေးအပါအဝင် ဒေါ်လာခုနစ်ဆယ်ဝန်းကျင် ကျသင့်ပါ၏။ လမ်းတစ်လျှောက်၌လည်း ဆစ်ဒနီပြဇာတ်ရုံ (Sydney Opera House) ၊ ဆစ်ဒနီဆိပ်ကမ်းတံတား၊ အမျိုးသားပန်းဥယျာဉ်စသည့် အထင်ကရနေရာများနှင့် သမိုင်းအရရော၊ ယဉ်ကျေးမှုအရပါ အရေးပါသည့် ကျွန်းများကို ဖြတ်သန်းသွားကာ ရှုခင်းအလှအပများကို ခံစားရင်း အရသာရှိသော ပင်လယ်စာ ဘူဖေးကို စားသောက်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါ၏။
ဤကဲ့သို့ အသွားအပြန်မဟုတ်ဘဲ နှစ်သက်ရာနေရာသို့ ဆင်း၍ လေ့လာနိုင်ရန် Hop-on Hop off သင်္ဘောများသည်လည်း သူ့အချိန်စာရင်းနှင့်သူ ပြေးဆွဲနေ၍ နေဝင်ချိန်ကြည့်သည့် သင်္ဘော၊ ဝေလငါးကြည့်သည့်သင်္ဘော၊ ဆိပ်ကမ်းတစ်လျှောက် အထင်ကရနေရာများကို ရှင်းလင်းပြသသည့် သင်္ဘောစသဖြင့် သင်္ဘောခရီးစဉ်များစွာ ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ကြောင်းလည်း သိရ၏။ အချို့ဆိုလျှင် ရွက်လှေများ၊ မော် တော်ဘုတ်များ၊ ငါးဖမ်းလှေများ သီးသန့်ငှားရမ်းကာ ရေထဲ၌ အေးအေးဆေးဆေး အပန်းဖြေနေကြသည်ကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါ၏။
ဆစ်ဒနီဆိပ်ကမ်းနှင့် Circular Quay သို့ သွားလည်သူများသည် သင်္ဘောဆိပ်မှ ၁၅ မိနစ်ခန့် လမ်းလျှောက်ရုံဖြင့် ရောက်နိုင်သည့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ အထင်ကရ ဆစ်ဒနီပြဇာတ်ရုံသို့လည်း သွားရောက်လေ့လာလေ့ ရှိကြပါသည်။ ထူးခြားဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းဖြင့် တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်၍ ၂၀ ရာစုအတွင်း အကောင်းဆုံး ဗိသုကာ လက်ရာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရကာ သက်တမ်းအားဖြင့် အလွန်မရှည်ကြာသည့်တိုင် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် အဆောက်အအုံအဖြစ် UNESCO မှ သတ်မှတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါ၏။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်က ဤပြဇာတ်ရုံအတွက် ဒီဇိုင်းများ ယှဉ်ပြိုင်စေခဲ့ကာ အနိုင်ရခဲ့သည့် ဒီဇိုင်းကို ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၁၂၀ အကုန်ခံကာ ၁၅ နှစ်ကြာ ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍအသီးသီးအတွက် အခန်းပေါင်း ခုနစ်ခန်းရှိကာ တစ်နှစ်လျှင် ပွဲပေါင်း ၁၅၀၀ ဖျော်ဖြေလျက်ရှိကြောင်း၊ ပွဲကြည့်ပရိသတ် ပေါင်း ၁ ဒသမ၂သန်းခန့်နှင့် လာရောက်လေ့လာသူပေါင်း ခုနစ်သန်းခန့်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဆစ်ဒနီဆိပ်ကမ်းသည် အပျော်စီးသင်္ဘောငယ်များ၊ ရွက်လှေများ၊ လှေငယ်များ ဖြင့် ရေပြင်ပေါ်၌ လှုပ်ရှားသက်ဝင်ရုံမျှမက ဆိပ်ကမ်းတစ်လျှောက် မြေပြင်ပေါ်၌လည်း စားသောက်ဆိုင်များ၊ အမှတ်တရပစ်္စည်းအရောင်းဆိုင်များ၊ ပြခန်းများဖြင့် ခရီးသွား များအလွန်စည်ကားလျက်ရှိရာ ဆစ်ဒနီမြို့သို့ အလည်သွားသူတိုင်း မရောက်မဖြစ် လေ့လာသင့်သည့် နေရာဖြစ်ကြောင်း ညွှန်းဆိုချင်ပါတော့သည်။
ကမ္ဘာ့အရှည်လျားဆုံးအဆောက်အအုံ မဟာတံတိုင်းကြီး Great Wall of China, World’s Longest Structure
November 2, 2017 April 20, 2021 Posted in Asia, China, Heritage, Photo Essay, UncategorizedTagged Asia, China, Nature, TravelLeaveacomment
တရုတ်နိုင်ငံက မဟာတံတိုင်းကြီးဟာ တရုတ်နိုင်ငံထဲ ဧရာမနဂါးကြီးတစ်ကောင် တောတွေ၊တောင်တွေ၊ လွင်ပြင်တွေကြား တက်လိုက်ဆင်းလိုက် ကွေ့လိုက်ကောက်လိုက် ဖြတ်ပြေးနေသယောင်ထင်ရပါတယ်။ မဟာတံတိုင်းကြီးက တကယ်ကိုအံ့သြစရာပါ။ လူတို့ပြုလုပ်ဖန်တီးတယ်လို့မထင်ရလောက်အောင် အထူးသဖြင့် နည်းပညာတွေ မထွန်းကားသေးတဲ့ ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက လူတွေဖန်တီးထားတာဆိုတာ မထင်ရလောက်အောင် အံ့အားသင့်စရာပါ။ မဟာတံတိုင်းကြီးကိုအာကာသထဲကနေကြည့်ရင်တောင် လှမ်းမြင်ရတယ်ဆိုတာကတော့ ယုံတမ်းစကားပါ။ အရွယ်အစားကြီးမားရှည်လျားပေမဲ့ အာကာသထဲကနေလှမ်းမြင်ရလောက်တဲ့ အထိတော့ သိသာစွာကြီးမားမနေပါဘူး။
တရုတ်ပြည်အရှေ့ဘက်ကနေအနောက်ဘက်ကို ဆောက်ထားတဲ့ မဟာတံတိုင်းကြီးက ပြည်နယ်ပေါင်း၉ခုကိုတောင်ဖြတ်ပြီးတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး လူတို့ဖန်တီးတဲ့ ကမ္ဘာ့အရှည်လျားဆုံးအဆောက်အအုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တံတိုင်းကြီးက တဆက်တည်းဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အပိုင်းအပိုင်းတွေ ဖြစ်နေပြီး တချို့အပိုင်းတွေက ဘေးတိုက်ပုံ၊ စက်ဝိုင်းပုံ၊ မျဉ်းပြိုင်ပုံဖြစ်နေပါတယ်။ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မဟာတံတိုင်းအရှည်က ၅၅၀၀မိုင်ဖြစ်ပြီး တကယ့် နံရံတံတိုင်းကြီးအနေနဲ့ က ၃၈၈၉မိုင်၊ သဘာဝအတားအဆီးတွေဖြစ်တဲ့ တောတောင် မြစ်ချောင်းတွေက ၁၃၈၇မိုင်၊ ကတုတ်ကျင်းတွေက ၂၂၁မိုင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ အခြားရှေးဟောင်းသုတေသနပြုချက်တစ်ခုအရ မဟာတံတိုင်းကြီးဟာ အခြား အခွဲတွေ အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးပေါင်းစပ်လိုက်ရင်ဖြင့် မိုင်ပေါင်း ၁၃၁၇၀ကျော် ရှည်လျားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တံတိုင်းကြီးရဲ့ အကျယ်ဆုံးအပိုင်းက ပေ၃၀ရှိပြီး အမြင့်ဆုံးအပိုင်းက ၂၆ပေရှိပါတယ်။
တံတိုင်းကြီးတည်ဆောက်ခဲ့ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က တရုတ်ပြည်ကြီးကို အခြားနိုင်ငံတွေဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ရန် အကာအကွယ်အဖြစ်အပြင် ကုန်သွယ်မှုနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းအဖြစ်ပါ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ မဟာတံတိုင်းကြီးကို အုတ်၊ ကျောက်တုံး၊ မြေကြီး၊ သစ်သားစတာတွေနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အုတ်တွေကပ်နေအောင် ကောက်ညှင်းဆန်မှုန့်အသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ ခေတ်အဆက်ဆက်က စစ်သား၊ အကျဉ်းသား၊ အမိန့်နဲ့စေခိုင်းခံခဲ့ရတဲ့ တောင်ယာလုပ်သားတွေ၊ စစ်အကျဉ်းသားတွေက တည်ဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး မဟာတံတိုင်းကြီးကို ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသင်္ချိုင်းလို့လည်း ပြောလို့ရလောက်တယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မဟာတံတိုင်းကြီးကိုဆောက်လုပ်နေစဉ်က လူပေါင်းသန်းချီအသက်စတေးခဲ့ရပြီး သေသွားတဲ့သူတွေရဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေကို တံတိုင်းကြီးထဲမှာ မြှုပ်နှံခဲ့ကြတယ်လို့သိရတာကြောင့်ပါ။
သေဆုံးသူတွေမနည်းဆို ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကလည်း နည်းမှမနည်းခဲ့ပဲကိုး။ ခရစ်တော်မပေါ်ခင် နှစ်ပေါင်း၂၀၀ကျော်ကနေ မင်မင်းဆက် (1368-1644 ခုနှစ်) အထိ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀နီးပါးတည်ဆောက်ခဲ့ရတာတဲ့လေ။ အစပိုင်းက ဟိုတစ်ပိုင်းဒီတစ်ပိုင်းတည်ဆောက်ထားခဲ့ပြီး မင်မင်းဆက်မှာ အခုထင်ရှားနေတဲ့ မဟာတံတိုင်းကြီးအဖြစ် ဆက်လက်တည်ဆောက်ခဲ့ကြတာ။ ကာလရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှ မဟာတံတိုင်းကြီးက တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးယိုယွင်းလာပါပြီ။ အထူးသဖြင့် အနောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဟာ ပျက်စီးမှုနှုန်းအလွန်မြန်ဆန်တာကြောင့် နောင်အနှစ်၂၀မှာ လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ ၁၉၆၆ကနေ ၁၉၇၆ခုနှစ်အတွင်းမှာ မဟာတံတိုင်းကြီးဆီက အုတ်တွေကို ဖြိုဖျက်ဖဲ့ယူကာ အိမ်ဆောက်ရာမှာ၊ ရေကာတာဆောက်ရာမှာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုမဖြိုဖျက်ခဲ့ကြဘူးဆိုရင်ဖြင့် မဟာတံတိုင်းကြီးက အခုထက်ပိုပြီးတည်တံ့ခိုင်မြဲနေမှာပါ။
ကမ္ဘာကျော် မဟာတံတိုင်းကြီးဆီ လာရောက်လေ့လာသူပေါင်း တစ်နှစ်ကို ၁၀သန်းကျော်ရှိပါတယ်။ မဟာတံတိုင်းကြီးမှာလေ့လာနိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းများစွာရှိတဲ့အနက် ဘေဂျင်းမြို့နဲ့နီးတဲ့ Badaling နဲ့ Mutianyu ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေက နာမည်အကြီးဆုံးပါ။ လေ့လာသူတွေအဆင်ပြေအောင် သွားရလာရလွယ်ကူအောင် ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ထားတာပါ။ နဂိုမူလသဘာဝအတိုင်းရှိနေတာကို ကြည့်ချင်ရင်တော့ ရှုခင်းအလှဆုံးဖြစ်တဲ့ Jinshanling အပိုင်းကို သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီအပိုင်းရောက်ဖို့ တောင်တက်မှရမှာပါ။
ကျွန်မကတော့ မဟာတံတိုင်းကြီးဆီရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ၂ကြိမ်စလုံး Mutianyu အပိုင်းဆီ သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘေဂျင်းကနေ တစ်နာရီခွဲလောက်မောင်းရုံနဲ့ရောက်နိုင်ပြီး အနီးဆုံးတောင်ခြေမှာ ကားရပ်ကာ တောင်ပေါ်ကို ကောင်းကင်ကြိုးရထား Cable Car နဲ့တက်ရတာပါ။ မဟာတံတိုင်းကြီးက အစပိုင်းမှာ ဧည့်သည်တွေနဲ့ ပြည့်ကျပ်နေပေမဲ့ ဝေးလေလူရှင်းလေပါ။ မဟာတံတိုင်းပေါ်ကမြင်ရတဲ့ရှုခင်းက အံ့မခန်းစရာပါ။ ကျွန်မ ဒုတိယအကြိမ် ရောက်ခဲ့တုန်းက ဆောင်းဦးကာလဖြစ်တဲ့အလျှောက် မဟာတံတိုင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိ တောင်ကုန်းတွေရဲ့ ကြွေရွက်ဝါတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရှုခင်းက မှင်သက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်လှပါတယ်။
လှပခမ်းနားပြီး သမိုင်းဝင်တဲ့ မဟာတံတိုင်းကြီးကို ၁၉၈၇ခုနှစ်မှာ UNESCO က ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်(၇)ပါးစာရင်းထဲမှာလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။ မဟာတံတိုင်းကြီးဆီသို့တရုတ်ပြည်ရောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေသွားရောက်လေ့လာသင့်ကြောင်း ညွှန်းဆိုလိုက်ရပါတယ်။
Dr. Nu Myat
October 12, 2017 April 20, 2021 Posted in Europe, Leisure, Travel, UncategorizedTagged Beach, Europe, Experience, Nature, TravelLeaveacomment
စုံတွဲတွေရဲ့ အိပ်မက်ကျွန်းလေး ဆန်တိုရီနီ
ဂရိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ရေပြာပြာနောက်ခံနဲ့ ချစ်စဖွယ်အိမ်ဖြူဖြူလေးတွေကို မြင်မိကြမှာပါ။ ပင်လယ်ကမ်းစပ်ကျောက်ကမ်းပါးတွေမှာ အစီအရီထပ်နေတဲ့ ဖွေးဖွေးဖြူဖြူ ချစ်စဖွယ်အိမ်လှလှလေးတွေ ရှိတဲ့နေရာကတော့ ဆန်တိုရီနီ(Santorini) လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရေပြာပြာနောက်ခံထားတဲ့ ကျောက်ကမ်းပါးနီနီ၊ အိမ်ဖြူဖြူ၊ ခေါင်မိုးပြာပြာဘုရားကျောင်းတွေနဲ့ ဆန်တိုရီနီကျွန်းက ရှုခင်းတွေက လှလွန်းလို့ ကမ္ဘာ့ကဗျာအဆန်ဆုံးနေရာတစ်ခုလို့ ပြောကြပါတယ်။ မြင်မြင်သမျှ အဆောက်အဦးတိုင်းဟာ အရောင်နုနုလေးတွေနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းနေပြီး ဓာတ်ပုံ ရိုက်ချင်စရာတွေချည်းပါပဲ။ Romantic ဖြစ်လွန်းလို့လည်း Pre Wedding ဓာတ်ပုံတွေ လာရိုက်တာတို့၊ Honeymoon ထွက်တာတို့နဲ့ ပျော်စရာကြီးပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း ဆန်တိုရီနီကျွန်းဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ စုံတွဲတွေရဲ့ Dream Destination လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ အခုက မင်္ဂလာဆောင်ရာသီဖြစ်လို့ ဒီဝါကျွတ်လက်ထပ်ကြမယ့် ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံတွေ အနေနဲ့ ပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်တဲ့အခါမှာ စဉ်းစားနိုင်အောင် ဆန်တိုရီနီကျွန်းလေးအကြောင်းကို ဒီ Issue မှာ ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ဆန်တိုရီနီဆိုတာ မြေထဲပင်လယ်ထဲရှိ အေဂျင်ပင်လယ်တွင်းက ဂရိကျွန်းစုတစ်စုပါ။ တကယ့်နာမည်ရင်းက သီရာ(Thira) ကျွန်းဖြစ်ပေမဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအကြား ဆန်တိုရီနီလို့ပဲ အသိများပါတယ်။ ဒီကျွန်းစုလေးဟာ အလှအပတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ သူ့ရဲ့သမိုင်းဝင်တဲ့အချက်ရယ်၊ ထူးခြားတဲ့ ပထဝီမြေအနေအထားရယ်ကြောင့်လည်း ကမ္ဘာကျော်တာပါ။
နောက်ပိုင်းလေ့လာမှုတွေအရ ပလေတိုရဲ့ဒဏ္ဏာရီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း၉၅၀၀ကျော်က ရေအောက်ကမ္ဘာထဲ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အတ္တလန္တိတ်မြို့တော်ကြီးဟာ ဆန်တိုရီနီကျွန်းမှာရှိခဲ့တယ်လို ယူဆနေကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လခြမ်းပုံဆန်တိုရီနီကျွန်းဟာ အခုက လခြမ်းပုံလိုဖြစ်နေပေမဲ့ ဟိုးအရင်တုန်းက စက်ဝိုင်းပုံပါတဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းသောင်းချီက ကျွန်းပေါ်ရှိ မီးတောင်ကြီး ပေါက်ကွဲလာတဲ့အခါ မီးတောင်ပတ်လည် မြေသားတွေ ရေထဲအကုန်နစ်မြုပ်ကုန်တာကြောင့် စက်ဝိုင်းအနားသတ်ပဲကျန်တော့လို့ လက်ရှိမြင်ရတဲ့ လခြမ်းပုံဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ မြုပ်သွားတဲ့ထဲမှာ အတ္တလန္တိတ်မြို့တော်ကြီးလည်းပါပြီး လက်ရှိ ဆန်တိုရီနီကျွန်းကြီးပေါ်မှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ Akrotoni မြို့ပျက်ကြီးက အဲ့ဒီမြို့ကြီးနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်လို့ ယူဆနေကြပါတယ်။
ဆန်တိုရီနီကျွန်းမကြီးအပါအဝင် ကျွန်း၃ကျွန်းက ခလယ်က မီးတောင်ကြီးကို ပတ်လည်ဝိုင်းထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီမီးတောင်ကြီးရာဇဝင်ကလည်း ဆန်းကျယ်ပါတယ်။ ဲ့ ၁၆၁၃BCက ဆန်တိုရီနီမှာဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဒုတိယအပြင်းထန်ဆုံးမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုထပ်ဖြစ်ပြီး ရေထဲမြုပ်သွားတဲ့ ကျွန်းအလည်သားနဲ့အတူ မီးတောင်ကြီးပါမြှုပ်သွားခဲ့ပြီး ၄၆BCကနေ ပင်လယ်ထဲကစပေါ်လာကာ ၁၉၄၀ခုနှစ်အထိ နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာအတွင်း ချော်ခဲတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ မီးတောင်ကြီးဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ဒီမီးတောင်ကြီးက ၁၉၅၀ခုနှစ်မှာနောက်ဆုံးအဖြစ် ၂၂ရက်ကြာပေါက်ကွဲထားပြီး အခုထိမီးတောင်ရှင်အဖြစ်ရှိနေပါတယ်။ ဒီမီးတောင်ကျွန်းပေါ်ကျွန်မတို့ ဧပြီလတုန်းက ဆန်တိုရီနီသွားလည်ရင်း သွားလေ့လာခဲ့တုန်းကဆို ချော်ခဲတောင်ပေါ်မှာ အငွေ့တွေထွက်နေဆဲပဲဖြစ်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
မီးတောင်ပေါက်ကွဲထားလို့ ဆန်တိုရီနီကျွန်းကြီးဟာ ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် လမုန့်ကြီးတစ်ခုကို ဓားနဲ့လှီးလိုက်သလို တစ်ဘက်က တုံးတိကြီး ဖြစ်နေပြီး တစ်ဘက်ကတော့ ခပ်ပြေပြေလေးဖြစ်နေပါတယ်။ မီးတောင်ဘက်ခြမ်းမှာ မတ်စောက်တဲ့ ကျောက်ကမ်းပါးကြီးတွေရှိနေပြီး ကျန်တစ်ဖက်မှာတော့ ပုံမှန်ကျွန်းတွေလို ပြေပြစ်တဲ့ကမ်းခြေတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တခြားကျွန်းတွေနဲ့မတူ ထူးခြားတာကတော့ ချော်ရည်တွေကြောင့် ကမ်းခြေတွေမှာ သဲမည်းကမ်းခြေ၊ သဲနီကမ်းခြေ၊ သဲဖြူကမ်းခြေဆိုပြီး အမျိုးမျိုးရှိနေတာပါ။ ကျောက်ကမ်းပါးဘက်အခြမ်းမှာတော့ ကမ္ဘာကျော်ထုံးအိမ်ဖြူဖြူလေးတွေ အစီအရီရှိနေပါတယ်။
ဥရောပနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဂရိကို သွားလည်မယ်ဆိုရင် ဥရောပဗီဇာဖြစ်တဲ့ ရှန်ဂန်ဗီဇာ လျှောက်ရပါမယ်။ ရှန်ဂန်ဗီဇာရှိပါက ဥရောပနိုင်ငံအတော်များများကို သွားလို့ရပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံကနေတစ်နိုင်ငံကူးရတာ သိပ်လွယ်ပါတယ်။ ဗီဇာလျှောက်တဲ့အခါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဂရိသံရုံးမရှိတော့ ဂရိနိုင်ငံကို တာဝန်ယူပေးထားတဲ့ ဂျာမနီသံရုံးကနေ ဗီဇာလျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆန်တိုရိနီကို သွားလည်မယ်ဆိုရင် ဧပြီလကုန်ကနေ နိုဝင်ဘာလဆန်းအထိ သွားလည်လို့ကောင်းပါတယ်။ နွေရာသီဖြစ်တဲ့ ဇွန်လကနေ စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းအထိကတော့ ရာသီဥတုအကောင်းဆုံးပါ။ နွေးထွေးတဲ့ နေရောင်ခြည်တောက်တောက်အောက်မှာ ဆန်တိုရီနီက သိပ်ကိုလှပါတယ်။ High Season ဖြစ်တာကြောင့် ဧည့်သည်တအားများပြီး ဟိုတယ်နဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်တွေကတော့ ဈေးများနေတတ်ပါတယ်။ ဧပြီ၊ မေနဲ့အောက်တိုဘာလတွေကတော့ လူလည်းသိပ်မများ၊ ဈေးလည်းသိပ်မကြီး၊ ရာသီဥတုလည်း သိပ်မဆိုးဆိုတော့ အေးအေးဆေးဆေးလည်ချင်သူတွေအတွက် သင့်တော်မှာပါ။
ဆောင်းတွင်းရာသီဖြစ်တဲ့ နိုဝင်ဘာလကနေ မတ်လထိကတော့ ဧည့်သည်အရမ်းနည်းပါတယ်။ လေကြောင်းလိုင်းတွေလည်း သိပ်မဆွဲပါဘူး။ စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ဟိုတယ်အတော်များများလည်း ပိတ်ပါတယ်။ ကမ်းခြေတွေမှာ ရေဆော့၊ အပန်းဖြေလို့ မကောင်းပေမဲ့ နေ့လည်နေ့ခင်း ကျွန်းပေါ်ကအလှတွေတော့ ခံစားနိုင်ပါတယ်။
ဂရိကို ဒီနှစ်သင်္ကြန် ရုံးပိတ်ရက်ရှည်ရတုန်းက သွားခဲ့ကြတာပါ။ သွားခဲ့တာ ၄လကျော်လောက်တော့ ရှိပြီပေါ့။ အဲ့တုန်းက ရန်ကုန်ကနေ Qartar Airways နဲ့ ကာတာနိုင်ငံတစ်ဆင့်ခံပြီး ဂရိနိုင်ငံ အေသင်မြို့ကိုတန်းသွားခဲ့တာ။ အရင်က ဂရိမှာ တစ်ပတ်လောက်နေမလို့ စိတ်ကူးရှိခဲ့ပေမဲ့ အရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာလို့ ရက်တွေရွှေ့ရင်း ၃ညအိပ်ပဲအချိန်ရခဲ့တယ်။ အေသင်ကို ညဘက်ရောက်သွားတော့ အေသင်မှာ ၂ညအိပ်ပြီး ဆန်တိုရီနီကိုတော့ နောက်တစ်နေ့ မနက်စောစော လေယာဉ်နဲ့ ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ အေသင်ကနေ ဆန်တိုရီနီကို ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်တဲ့ Agean Airlines နဲ့ သွားခဲ့ပြီး ၄၅မိနစ်သာကြာပါတယ်။
အေသင်ကနေ ဆန်တိုရီနီကို ရေလမ်းကနေ Speed Boat တွေ၊ သင်္ဘောတွေနဲ့ သွားလည်းရပေမဲ့ ၄နာရီကနေ ၈နာရီကြားကြာတယ်ဆိုတော့ အချိန်တော်တော်ကုန်မယ်ပေါ့။ ရေကြောင်းနဲ့ သွားမယ်ဆိုရင် အေသင်မြို့နားရှိ Piraeus ဆိုတဲ့ ဆိပ်ကမ်းကနေ ဆန်တိုရီနီကျွန်းကို သင်္ဘော တစ်နေ့ လေးကြိမ်လောက်ပြေးဆွဲပါတယ်။ သင်္ဘောတွေမှာ ရိုးရိုးပုံမှန်နဲ့ High-speed သဘောၤဆိုပြီးရှိပါတယ်။ Blue Star Ferries (35 -40 euro) က ၈နာရီကြာပြီး နည်းနည်းပိုမြန်တဲ့ Hellenic Seaways က ၆နာရီကြာကာ အမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ SeaJets (70-75 euro) က ၅နာရီပဲကြာပေမဲ့ အရမ်းမြန်တဲ့ High Speed Boat ဖြစ်တာကြောင့် သင်္ဘောမူးတတ်ပါတယ်။
ဆန်တိုရီနီကျွန်းမှာ တစ်ရက်ပဲ အပြည့်လည်ပြီး နောက်နေ့မှာ တခြားနိုင်ငံ ကူးလိုက်ရတော့ ခရီးစဉ်က တော်တော်လေးကို Rush ဖြစ်သွားတယ်လို့ ပြောရမယ်။ တခြား Austria နိုင်ငံ မှာ Hotel အခန်းခတွေ ပိုက်ဆံရှင်းပြီး ဖြစ်နေတော့ အရင်ဆွဲထားတဲ့ ခရီးစဉ်အတိုင်းပဲ ဆက်သွားလိုက်ရတော့ ဂရိမှာ ရက်တော်တော်နည်းသွားတယ်။ တကယ်တမ်း ဂရိမှာ လည်စရာတွေ အများကြီး။ ဓာတ်ပုံရိုက်စရာနေရာတွေ ပေါမှပေါ။ သူ့တစ်နိုင်ငံထဲ တစ်ပတ်-၁၀ရက် အေးအေးဆေးဆေးလည်လို့ရပါတယ်။
ဆန်တိုရီနီက တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်းသေးသေးလေးပါ။ စတုရန်းမိုင်၄၈မိုင်သာကျယ်တဲ့ ဆန်တိုရီနီကျွန်းမကြီးကသေးငယ်လို့ ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ မြို့ရွာလေးတွေက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု နီးနီးလေးတွေပါ။ တောင်နဲ့မြောက်ကားနဲ့ သွားမယ်ဆိုရင်တောင် ၁နာရီမကြာလောက်ဘူး။ ကျွန်းပေါ်ရှိ လေဆိပ်နားက Fira(ဖဲရာ) မြို့က ကျွန်းရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပေမဲ့ ရွာကြီးဖြစ်တဲ့ Oia (အီးယာ)ကရှုခင်းအရမ်းလှလို့ အကျော်ကြားဆုံးပါ။ ပုံတွေမှာမြင်နေကြရှုခင်းတွေက Oiaမှာရိုက်ထားတာတွေပါ။ Oia ဘက်ကတော့ ဟိုတယ်တွေက ရှယ်ပဲပေါ့။ မီးတောင်ဘက်ကို မျက်နှာပြုထားတဲ့ ကျောက်ဆောင်ကြီးတွေမှာ ဟိုတယ်တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေ ဆောက်ထားကြတာ။ ဟိုတယ်တွေဆို Private Pool တွေ Jaccuzzi တွေနဲ့ အမိုက်စား။ မကောင်းတာက ချောက်ကမ်းပါးဘက်က ဟိုတယ်တွေဆီရောက်ဖို့ လှေကားထစ်တွေ တက်ရ၊ အထုပ်တွေ သယ်ရတယ်။ ဈေးကလည်း တခြားနေရာတွေထက် ပိုဈေးကြီးတယ်။
နုမြတ်တို့ကတော့ ဈေးပိုသက်သာပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းရှိတဲ့ Fira မြို့မှာတည်းခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့က ဟိုတယ်လေးတွေက ချစ်စရာလေးတွေ။ အိမ်သေးသေးလေးတွေလိုပဲ။ သုံးထားတဲ့ အရောင်လေးတွေကလည်း နူးနူးညံ့ညံ့လေးတွေ။ ပြီးတော့ Fira က မြို့ကြီးဆိုတော့ မြို့ထဲမှာ စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ဘားတွေနဲ့ စည်စည်ကားကားရှိလှတယ်။ Fira နားက Imerovigli ဆိုတဲ့ ရွာလေးမှာလည်း ဟိုတယ်တွေလှလို့ တည်းကြတယ်တယ်။ ကမ်းခြေဘက်အခြမ်းက ဟိုတယ်တွေကတော့ စည်ကားသလို၊ ဈေးပိုသက်သာပြီး ကမ်းခြေအရသာကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆန်တိုရီနီကျွန်းမှာပဲရနိုင်တဲ့ ခံစားချက်မျိုးရဖို့ ချောက်ကမ်းပါးဘက်မှာ တည်းသင့်တယ်လို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ကျောက်ဂူတွေထဲမှာတည်းနေရသလို ခံစားနိုင်တဲ့ Cave House လေးတွေကိုလည်း ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
အဲ့မှာက လည်ရပတ်ရတာ အရမ်းလွယ်တယ်။ ကားလိုင်စင်ပါရင် ကိုယ်တိုင်တောင် ကားမောင်းလျှောက်လည်လို့ရတယ်။ International လိုင်စင်ဆိုရင် ဌားလို့ရတာ သေချာသပေါ့။ နုမြတ်မေးကြည့်တဲ့ကောင်တာမှာတော့ မြန်မာလိုင်စင်နဲ့လည်းရတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဘာလိုင်စင်မှ မပါတော့ မမောင်းလိုက်ရဘူး။ ကားသေးလေးတွေဆိုရင် တစ်စီးကို တစ်ရက်ကို ၅၀ယူရို လောက်က စပြီး ဈေးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဓာတ်ဆီကတော့ ကိုယ်ထည့်ရပါတယ်။ ကားဌားမယ်ဆိုရင် ခပ်သေးသေးပဲဌားပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်းလေးက သေးပြီး လမ်းလေးတွေကလည်း ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေမို့လို့ပါ။ Honeymooner တွေအနေနဲ့ အမိုးပွင့်ကားလှလှလေးငှား။ အချစ်သီချင်းလေးတွေဖွင့်။ ကဗျာဆန်လှတဲ့ ရှုခင်းလေးတွေကြားက လမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေမှာ နှစ်ယောက်ထဲ ကားလျှောက်မောင်းရတာ တကယ်ကို Romantic ဖြစ်နေမှာပါ။
ကားခဈေးကြီးရင် အမိုးပွင့် ATV ယာဉ်တွေ တစ်ယောက်ချင်းစီ ဌားစီးလည်းရပါတယ်။ တချို့ဆို လမ်းလျှောက်သွားကြတယ်။ ရွာလေးတွေက သာယာလို့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်လေးတွေလှလို့ လမ်းလျှောက်လေ့ရှိကြတယ်။ ကျွန်းပေါ်ပြေးဆွဲနေတဲ့ ဘတ်စ်ကားနဲ့ Taxi တွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဆန်တိုရီနီရောက်ရောက်ချင်းမနက်မှာ ဟိုတယ်အထုပ်ချပြီး လည်တော့တာပါပဲ။ မလည်လို့လည်း မရဘူး။ တစ်ရက်ပဲရှိတာဆိုတော့လေ။
ဆန်တိုရီနီရဲ့ မီးတောင်ကြီးက ထူးခြားသလို မီးတောင်ရှင်ကြီးလည်း ဖြစ်နေတော့ မီးတောင် ခရီးစဉ်တိုးတွေ နေရာတကာမှာ အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ်။ နုမြတ်တို့ရောက်တဲ့အချိန်နဲ့ မီးတောင်တိုးထွက်တဲ့ အချိန် အဆင်ပြေတော့ ဝယ်လိုက်ကြတယ်။ မီးတောင်၊ ပင်လယ်ရေပူစမ်း၊ Thirassia ရွာနဲ့ Oia ရွာမှာ နေဝင်ချိန်ကြည့်တာအပါ စုစုပေါင်း ၄၀ယူရိုကျပါတယ်။ မီးတောင်နဲ့ ရေပူစမ်းပဲ သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ၂၀ယူရို ဖြစ်ပြီး Thirassia ကျွန်းပါ သွားမယ်ဆိုရင် ၂၆ယူရိုပါ။
Fira မြို့မှာ မီးတောင်ဆီသွားတဲ့ အပျော်စီးသင်္ဘောဆိပ်ရှိပါတယ်။ မြို့ပေါ်ကနေ ဆိပ်ကမ်းဆီဆင်းရာမှာ လှေကားထစ်ပေါင်း ၆၀၀ကျော်ရှိပြီး လမ်းလျှောက်မဆင်းချင်ပါက ဆန်တိုရီနီရဲ့ နာမည်ကျော် မြင်းပုလေးတွေ စီးသွားရင်သွား၊ မစီးရင် Cable Car နဲ့ဆင်းလို့ရပါတယ်။ Cable Car မှာလူတွေများပြီး တန်းစီနေရတာရယ်၊ မြင်းပုလေးတွေကို သနားတာရယ်။ လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သိပ်မဝေးဘူးထင်တာရယ်၊ လမ်းမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တာရယ်ကြောင့် လမ်းလျှောက်ပဲ ဆင်းခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါ သိပ်မှားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ပြောရမယ်။ သိပ်မဝေးဘူးထင်ရပေမဲ့ တကယ်တမ်း လှေကားထစ်ပေါင်း ၆၀၀ကျော်ကို မနည်းဆင်းခဲ့ရတာ။ သင်္ဘောထွက်မယ့်အချိန်ကလည်း ကပ်နေတော့ မပြေးရုံတမယ်ပါပဲ။ လမ်းလျှောက်ဆင်းရတဲ့ လှေကားထစ်နဲ့ မြင်းပုဆင်းတဲ့ လှေကားအတူတူပဲဆိုတော့ လမ်းမှာ မြင်းပု ချေးစော်ကလည်း နံပါသေးတယ်။ မစင်တုံးတွေ တက်မနင်းမိအောင်လည်း ရှောင်ရပါသေးတယ်။ အစမကောင်းဘူးလို့ပြောရမှာပါ။ အဲ့တစ်နေ့လုံး တခြားနေရာတွေမှာလည်း ခြေတိုအောင် တက်ရဆင်းရသေးတယ်လေ။
သင်္ဘောက သစ်သားရွက်သင်္ဘောပါ။ ၂ထပ်သင်္ဘောဖြစ်ပြီး Mini Bar နဲ့အိမ်သာလည်းပါပါတယ်။ သင်္ဘောကို ၁၀မိနစ်လောက်စီးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ မီးတောင်အောက်က သင်္ဘောဆိပ်ကို ရောက်ပါတယ်။ မီးတောင်တက်ဖို့ တစ်ယောက်ကို ၂ယူရိုထက်ပေးရပါတယ်။ မီးတောင်ကြီးက ချော်ခဲကြီးတွေနဲ့ ပြည့်နေပြီး ရေပြာပြာအောက်ခံမှာ မီးတောင် မဲမဲ နီနီကြီးကို အနီးကပ်မြင်တွေ့ရတာ အမြင်အရမ်းဆန်းတာပဲ။ မီးတောင်ပေါ်တက်တဲ့လမ်းကလည်း ချော်ခဲတွေကြီးပဲဆိုတော့ မနည်းတက်ရတယ်။ ထိပ်ရောက်တော့မလား ရောက်တော့မလားနဲ့ အသေတက်ရတာပါဆို။ တက်ရင်း ဓာတ်ပုံတွေလည်း ရိုက်ရင်းဆိုတော့ သင်္ဘောတစ်စီးလုံးမှာ ကိုယ်တွေ ညီအစ်မတွေပဲ နောက်ဆုံးပေါ့။ အမတို့ဆို မောလွန်းလို့ မီးတောင်ထိပ်ထိမတက်နိုင်ကြတော့ဘူး။ မီးတောင်ကြီးက အရှင်ဆိုတော့ ပူလည်းပူတာကိုး။ နုမြတ်ကတော့ ကြိုးစားပြီး ထိပ်ထိတက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ထိပ်နားမှာ မီးတောင်ချိုင့်ကြီးတစ်ခုရှိပြီး အဲ့ထဲကနေ မီးခိုးငွေ့တွေ ထွက်နေတာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ခုနေများမီးတောင်ကြီး ထပေါက်လိုက်လို့ကတော့ သေပြီဆရာဆိုပြီး တွေးရင်း ပြုံးစိစိနဲ့ပေါ့။ မီးတောင်ပေါ်ကနေ မြင်တွေ့ရတဲ့ ရှုခင်းတွေကတော့ အရမ်းလှပါတယ်။ ဆန်တိုရီနီ ကျွန်းမကြီးကို ဒီဘက်က လှမ်းမြင်ရတဲ့ ရှုခင်းကလည်း ရှယ်ပါပဲ။ မီးတောင်မှာ သင်္ဘောက ၁နာရီနဲ့ ၁၅မိနစ်ရပ်ပေးပါတယ်။ မီးတောင်တက်မယ် စိတ်ကူးရင် သွားရလာရ လွယ်ကူတဲ့ ဘောင်းဘီနဲ့ Walking Shoes ပဲ ဝတ်ပါ။ ကျန်တာ အဆင်မပြေပါ။ လူကြီးတွေပါရင် မတက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
မီးတောင်ကနေထွက်လာကြပြီး မီးတောင်အောက်ခြေ ရေပြင်တစ်နေရာမှာ ရေပူစမ်းလို ကွက်ပြီးပူနွေးနေတဲ့ နေရာရှိပါတယ်။ အဲ့မှာ ရေပူစိမ်လို့ရအောင် နာရီဝက်လောက်ရပ်ပေးပါတယ်။ အဲ့နေရာရောက်အောင် သင်္ဘောကနေ ရေကူးပြီး သွားရတယ်။ သင်္ဘောပေါ်ကနေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် တစ်ဗွမ်းဗွမ်းနဲ့ ရေထဲ ခုန်ဆင်းကြတာ ပျော်ဖို့ကောင်းမှကောင်း။ နုမြတ်တို့ကတော့ ပွဲကြည့်ပရိသတ်ပေါ့။ ရေကူးဝတ်စုံလည်း ပါမလာ။ ပင်လယ်ထဲ ရေကူးရမှာလည်း မရဲတော့ သင်္ဘောပေါ်ကနေပဲ ဆင်းသွားသူတွေကို အားပေးခဲ့ပါတယ်။
🏘Thirasia ရွာ သွားလည်မယ်
ရေပူစမ်းပြီးတော့ နောက်တစ်ကျွန်းကို ဆက်ကူးခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ကျွန်းက ရွာလေးက အေးအေးချမ်းချမ်းရှိပြီး တောင်ပေါ်ရွာလေးရဲ့ အိမ်လေးတွေက တကယ့်ရှေးဟောင်းဂရိအိမ်လေးတွေတဲ့။ တက်ရဆင်းရတာ များလို့ တောင်ပေါ်တက်မကြည့်တော့ဘဲ ကမ်းခြေက စားသောက်ဆိုင်မှာပဲ အေးအေးလူလူ Lunch စားလိုက်ကြတယ်။ အဲ့နားက အိမ်လေးတွေလှလို့ သေချာကြည့်လိုက်တော့ လှေတွေထည့်ထားရာ လှေဂိုဒေါင်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ လှေဂိုဒေါင်ကိုတောင် လှတပတလေးတွေ လုပ်ထားတတ်ကြတယ်။ တကယ်ပါပဲ။
🌄Oia မှာ Sunset ကြည့်မယ်
ကျွန်းလေးမှာ အေးအေးဆေးဆေးအနားယူပြီးနောက် တစ်ဖက်ကမ်းမှာ ရှိတဲ့ Oia ရွာကို လိုက်ပို့ပေးတယ်။ ရွာသာပြောတယ်။ Santorini ကျွန်းမှာ အစည်ကားဆုံးနေရာပါပဲ။ ကျွန်းပေါ် ပုံတွေမှာမြင်နေကြရှုခင်းတွေက Oiaမှာရိုက်ထားတာတွေပါ။ သင်္ဘောဆိပ်ကနေ အပေါ်ရောက်ဖို့တော့ မနည်းတက်ခဲ့ရတယ်။ ဒီမှာကျလမ်းလျှောက်တက်မှပဲရမှာ။ တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူး။ ဒါကြောင့် လူကြီးတွေပါရင် မီးတောင်Tour မသွားသင့်ဘူးလို့ အကြံပေးချင်တယ်။ နုမြတ်တို့ကတော့ နည်းနည်းတက်လိုက် ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်နဲ့ဆိုတော့ အချိန်တော်တော်ကုန်သွားတယ်။
အပေါ်မှာတော့ လူတွေ အရမ်းစည်ကားပြီး ဟိုတယ်လေးတွေ ဆိုင်လေးတွေ အစီအရီနဲ့ အရမ်းလှတာပဲ။ ခရီးသည်အလာဆုံးနေရာဖြစ်လို့ တစ်ရွာလုံးနီးပါးက ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့ ပြည့်နေတာပါ။ အမိုးပြာပြာအခုံးလေးတွေနဲ့ Churchကျောင်းတွေကိုလည်း Oia မှာတွေ့မြင်ရမှာပါ။ အပြာရောင်အမိုးခုံး သုံးခုနဲ့ Church ကျောင်းကတော့ ဆန်တိုရီနီရဲ့ အဓိက အမှတ်အသားမို့လို့ အဲ့မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ရွာကနေလှမ်းမြင်ရတဲ့ ရေပြာပြာထဲက မီးတောင်ရှုခင်းတွေ၊ နေဝင်ချိန်ရှုခင်းတွေ သိပ်လှပါတယ်။ နေဝင်ချိန်ကြည့်ဖို့ဆိုရင် Oia ရဲတိုက်ဟောင်းကြီးပေါ်တက်ပြီး ကြည့်ပါ။ သိပ်လှပါတယ်။ ပင်လယ်ထဲထိုးထွက်နေလို့ အိမ်တွေဘက်အခြမ်းကို နေဝင်ဆည်းဆာနေရောင်လေးခနေတာ သိပ်ကြည့်ကောင်းပါတယ်။ နေဝင်ပျိုးစအချိန်မှာ မီးစထွန်းလာကြတဲ့အခါမှာလည်း သိပ်လှတာပါပဲ။ နေဘယ်အချိန်ဝင်မလဲဆိုတာကို အင်တာနက်ထဲရှာကြည့်ပါ။ မဟုတ်ရင် အကြာကြီး ငုတ်တုတ်ထိုင်စောင့်နေရမှာပါ။ နုမြတ်တို့တုန်းက ဆို ည၈နာရီလောက်မှ နေဝင်ပါတယ်။
ကျွန်းဆိုတော့ ကမ်းခြေလည်း ရှိတာပေါ့။ မီးတောင်ပေါက်ကွဲထားလို့ တခြားကျွန်းတွေနဲ့မတူတမူထူးပြီး ချော်ရည်တွေကြောင့် ကမ်းခြေတွေမှာ သဲမည်းကမ်းခြေ၊ သဲနီကမ်းခြေ၊ သဲဖြူကမ်းခြေဆိုပြီး အမျိုးမျိုးရှိနေတာပါ။ Red Sand Beach သဲနီကမ်းခြေက ကျောက်တောင်နီနီ၊ သဲနီနီ၊ ရေစိမ်းစိမ်းလေးနဲ့ အမြင်ဆန်းပါတယ်။ Black Sand Beach လို့ခေါ်တဲ့ Kamari Beach (Perissa Beach) သဲမည်းကမ်းခြေကို နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ သဲထက်စာရင် ချော်ခဲတွေ ပြည့်နေတဲ့ ကမ်းခြေလို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ သဲသောင်ပြင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကုလားထိုင်တွေနဲ့ထိုင်ကြည့်ရတဲ့ လဟာပြင်ရုပ်ရှင်ရုံလည်းရှိတယ်လို့ သိရတယ်။
ပင်လယ်ထဲမှာ ရွက်လှေစီးတာတို့၊ Cruise စီးတာတို့လုပ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး အနားယူနိုင်ပါသေးတယ်။ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့အတူတူ ရွက်လှေပေါ်မှာ နေဝင်ချိန်ကြည့်ရင်း ဝိုင်လေးသောက်ရင်း ဘယ်လောက်တောင် ကဗျာဆန်လိုက်မလဲနော်။
ဆန်တိုရီနီဟာ ဥရောပရှိ၂ခုတည်းသော ပူအိုက်တဲ့ကန္တာရလိုရာသီဥတုရှိရာဒေသထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီဥတုခြောက်သွေ့နွေးထွေးလို့ ဝိုင်ချက်လုပ်ရာမှာအောင်မြင်ပြီး ဆန်တိုရီနီဝိုင်က ကမ္ဘာကျော်ပါတယ်။ ရေထက်ဝိုင်ပိုပေါတဲ့ ဆန်တိုရီနီမှာ ဝိုင်လိုက်မြည်းစမ်းနိုင်တဲ့ Tour လည်းရှိပါတယ်။
ပလေတိုရဲ့ဒဏ္ဏာရီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း၉၅၀၀ကျော်က ရေအောက်ကမ္ဘာထဲ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အတ္တလန္တိတ်မြို့တော်ကြီးဟာ ဆန်တိုရီနီကျွန်းမှာရှိခဲ့တယ်လို ယူဆနေကြပါတယ်။ မီးတောင်ကြောင့် မြုပ်သွားတဲ့ထဲမှာ အတ္တလန္တိတ်မြို့တော်ကြီးလည်းပါပြီး လက်ရှိ ဆန်တိုရီနီကျွန်းကြီးပေါ်မှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ Akrotoni မြို့ပျက်ကြီးက အဲ့ဒီမြို့ကြီးနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်လို့ ယူဆနေကြပါတယ်။ အဲ့မြိုကပျက်ကြီးဆီလည်း သွားလေ့လာလို့ရပါတယ်။
ကျွန်းသူကျွန်းသားတွေရဲ့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုလေ့လာချင်ရင်တော့ Pyrgos ရွာလေးကိုသွားရပါမယ်။ ရွာလေးက အေးအေးဆေးဆေးရှိပြီး လူရှင်းကာ သူတို့ရဲ့ လူနေမှုဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို တွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။ ကျွန်းအလည်ပိုင်း တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာရှိတဲ့ ဂရိရှေးဟောင်းရွာလေးပါ။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဆန်တိုရီနီအကြောင်း တစေ့တစောင်း သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ Santorini သွားမယ်ဆိုရင် May လကနေ September လအထိက နွေရာသီဖြစ်ပြီး နေသာတဲ့ရာသီဥတုရှိလို့ သွားလို့အကောင်းဆုံးကာလတွေပါ။ အဲ့ရာသီမှာ ဧည့်လာများပါတယ်။ ဂရိမှာ ဆန်တိုရီနီကျွန်းအပြင် Descendents of the sun ရုပ်ရှင်ကားရိုက်တဲ့ သင်္ဘောပျက်ကြီးရှိတဲ့ Zakynthosကျွန်း၊ အရမ်းလှပြီး Party Island လို့ခေါ်တဲ့ Mykonos ကျွန်းတို့ကိုလည်း သွားလည်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မြို့တော် အေသင်ကလည်း မရောက်မဖြစ်ပေါ့။ ရှေးဟောင်းဂရိသမိုင်းတွေ၊ ဂရိနတ်ဘုရားတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ နေရာဖြစ်လို့ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ဆန်တိုရီနီသွားရင်းနဲ့ တလက်စတည်း ဂရိနိုင်ငံက တခြားမြို့တွေပါ သွားလည်မယ်ဆိုရင် တစ်ပတ် ၁၀ရက်လောက်အချိန်ပေးမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ဂရိခရီးစဉ်ဟာ ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံတွေအတွက် တကယ်ကို ခံစားမှုရသအမျိုးမျိုးပေးစွမ်းနိုင်မှာ သေချာပါတယ်။
May 24, 2017 April 20, 2021 Posted in Animals, Asia, Thailand, UncategorizedTagged adventure, Asia, food, Nature, Thailand, TravelLeaveacomment
ထိုင်းဆိုရင် မြို့ပြဆန်တဲ့ ဘန်ကောက်၊ ဘန်ကောက်ကနေ နေ့ချင်းပြန်သွားလို့ရတဲ့ ပတ္တရား၊ အယုဒ္ဓယ၊ ဖူးခက်ကမ်းခြေစတာတွေပဲ သွားလေ့ရှိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာခရီးသွားတွေ သွားလာကြတာကတော မြောက်ပိုင်းက တောင်ပေါ်မြို့လေး ချင်းမိုင်ပါ။ ချင်းမိုင်က ရာသီဥတုသာယာသလို ပန်းပေါင်းစုံဖူးပွင့်သာယာလို့ အပူပိုင်းဒေသကလာတဲ့ နုမြတ်တို့အကြိုက်ပေါ့။ ရှမ်းပြည်နဲ့ ကပ်ရပ်မှာ ရှိပြီး မြန်မာတွေက ဇင်းမယ်လို့လည်း သိထားကြပါတယ်။ တချိန်က မြန်မာတွေ လက်အောက်ရောက်ခဲ့ဖူးပြီး မြန်မာပြည်နဲ့ အနီးအနားမှာ ရှိလို့ မြန်မာအငွေ့အသက်တွေ များစွာရှိလို့နေပါတယ်။
ချင်း မိုင်မှာက တန်ခိုးကြီး ရှေးဟောင်းဘုရားစေတီတွေရှိသလို၊ လည်ပတ်စရာတွေ၊ Adventure လုပ်စရာတွေလည်း ရှိလို့နေပါတယ်။ ချင်းမိုင်ကို ဒီဇင်ဘာလတုန်းက ၄ညအိပ်၅ရက်ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆို ၂ညအိပ် ၃ရက်နဲ့ လောက်ပေမဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးတောင် Doi Inthanon ဘက်ပါ ခရီးဆက်မှာ ဖြစ်လို့ နောက်ထပ် ၂ရက်ဆက်နေတာပါ။ မြန်မာနဲ့ နယ်စပ်မြို့ ချင်းရိုင်နဲ့ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ လာအို သုံးနိုင်ငံ ထိစပ်နေတဲ့ ရွှေတြိဂံနယ်မြေတွေဆိ သွားမယ်ဆိုရင်လည်း နောက်ထပ် ၂ရက် ထပ်နေမှ ရမှာပါ။ ချင်းမိုင်ကို ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် သွားလိုသူတွေ အတွက် ကျွန်မတို့ရဲ့ ခရီးစဉ် အကြမ်းဖျဉ်းလေးကို ရေးသား ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Day 1 ရန်ကုန်-ချင်းမိုင်- Night Safari
ရန်ကုန်ကနေ ချင်းမိုင်ကို တိုက်ရိုက်လေကြောင်းလိုင်းတွေ ရှိနေလို့ ဘန်ကောက်ကနေ တဆင့်သွားစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ နုမြတ်တို့ကတော့ Bangkok Airways နဲ့သွားပါတယ်။ Bkk Airways ထွက်တဲ့ အချိန်ရယ်၊ အစားအသောက်ရယ်၊ Service ရယ် ကြိုက်လို့ သွားဖြစ်တာပါ။ နေ့လည် ၁း၄၀ ထွက်ပြီး ချင်းမိုင်ကို ထိုင်းအချိန် ၃း၄၀ pmမှာရောက်ပါတယ်။ ချင်းမိုင်မှာ ကြိုစီစဉ်ထားတဲ့ Tour Guide ရယ်၊ ၈ယောက်ဆန့်တဲ့ Van Car ရယ် အသင့်လာကြိုနေပါတယ်။
ချင်းမိုင်မှာက Taxi တွေ ရှားတော့ လူများရင် ကား ဌားထားမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ကားက van ကားဆို တစ်နေ့ကို ၁၈၀၀-၂၀၀၀ ဘတ်ကျပါတယ်။ ဓာတ်ဆီမပါဘဲ Driver ပါအပြီးပေါ့။ ရက်များရင် လျော့ပေးပါတယ်။ Tour Guide ကတော့ သိပ်မလိုပါဘူး။ ခေါ်ချင်ရင်တော့ တစ်ရက်ကို ဘတ်၁၅၀၀ ကနေ ၃၀၀၀ ထိ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မူတည်ပြီး အစားစားရှိပါတယ်။
Taxi ဆိုရင်တော့ လေဆိပ်ကနေ မြို့ထဲ နေရာပေါ်မူတည်ပြီး ဘတ် ၁၅၀ ကနေ ၃၀၀ပါ။ Shuttle Bus လည်းရှိပြီး တစ်ယောက်ကို ဘတ်၆၀လောက်ကျမှာပါ။
လေယာဉ်ကွင်းကနေ အရင်ဆုံး Hotel မှာ Check in ဝင်ပါတယ်။ Hotel ကတော့ မြစ်ဘေးကပ်ရပ် Maraya Resort ပါ။
ကျယ်ဝန်းလှတဲ့ အခန်းကြီးရယ် အခန်းကနေလှမ်းမြင်ရတဲ့ မြစ်နဲ့ တစ်ဖက်ကမ်းက ဘုရားနဲ့ အတော်လေးကို သာယာပါတယ်။ ဒီ Resortလေး က အခန်းဖွဲ့စည်းပုံရယ်၊ မနက်စာစားတဲ့နေရာလေးကိုလည်း သိပ်သဘောကျပါတယ်။
ဝင်ကြေး- လူကြီး ဘတ်၈၀၀၊ ကလေး ဘတ် ၄၀၀
Hotel မှာ ပစ္စည်းချပြီးတာနဲ့ Night Safari ကို တန်းသွားကြပါတယ်။ Night Safari က ချင်းမိုင်ရဲ့ အဓိက Attraction ထဲမှာပါပြီး ရှားပါးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကို တစုတစည်းထဲ ပြထားတဲ့ နေရာလေးပါ။ တိရစ္ဆာန်တွေကို သဘာဝအတိုင်း အမှောင်ချထားတဲ့ တောကြီး မျက်မည်းထဲ ဘေးနှစ်ဖက်ပွင့်ကားကြီးတွေနဲ့ သွားရတာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာပါ။ Night Safari မှာ အရိုင်းနဲ့ အယဉ် ၂ပိုင်းခွဲထားပြီး ည ၇နာရီကနေ ၁၀နာရီကြား ၁၅မိနစ်တစ်ကြိမ် ကားထွက်တာကြောင့် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဘက် အရင်သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ကြောင်းကို တစ်နာရီလောက် ကြာနိုင်ပါတယ်။
Night Safari မှာ တိရစ္ဆာန်ပေါင်း ကျော်ရှိပြီး တချို့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေကိုတော့ ကားတွေနားမလာနိုင်အောင် လျှိုမြောင်တွေ ချိုင့်ဝှမ်းတွေ ခံပေးထားပြီး အကာအကွယ်တွေ ထားပေးထားပါတယ်။ ဒရယ်တို့၊ သစ်ကုလားအုတ်တို့၊ သားပိုက်ကောင်တို့၊ မြင်းကျားတို့ကတော့ ကားတွေနားထိရောက်လာပြီး အစာတောင်းလို့ ပျော်စရာကြီးပါ။
ဒါ့အပြင် ဖြူကောင်တွေ၊ ကျားပေါက်လေးတွေ၊ သာလိကာလေးတွေ၊ ဇီးကွက် မျက်ပြူးကြီးတွေနဲ့ လည်း ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ပါသေးတယ်။ Show အနေနဲ့ကတော့ ည၇နာရီမှာ White Tiger Show (ကျားဖြူပြပွဲ)နဲ့ ည၈နာရီနဲ့ ၉နာရီတို့မှာ Musical Fountain Water Screen Laser Light Show လေဆာရေပန်းဂီတပြပွဲ ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Wat Prathet Doi Suthep
ဒီနေ့ကတော့ စောစောစီးစီး ဘုရားသွားတဲ့နေ့ပါ။ Doi Suthep တောင်ပေါ်က Wat Prathet စေတီကို မနက်စာစားပြီးတာနဲ့ သွားပါတယ်။ ချင်းမိုင်ကနေ ၁နာရီကြာမောင်းရပြီး တောင်တက်ကားလမ်းအတိုင်း တောင်ပေါ်ကို ဆက်တက်ရပါတယ်။ ဘုရားမုခ်ဦးကနေ ရင်ပြင်ပေါ်ကို လှေကားထစ် ၂၀၀ရှိ နာမည်ကြီးလှေကားနဲ့ တက်နိုင်သလို ကြိုးဆွဲ ရထားနဲ့ တက်နိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်လှေကားကို ဒေါင်လိုက်မဟုတ်ဘဲ ၄၅ဒီဂရီလောက် ခပ်စောင်းစောင်းတက်ရတာမျိုးပါ။ တစ်ယောက်ကို ဘတ် 20 ပေးရပါတယ်။
Wat Prathet (ပရာသတ်စေတီ) က မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ပုခုံးရိုးတော် ဌာပနာထားတဲ့ စေတိ ဖြစ်ပြီး ထိုင်းရဲ့ တန်ခိုးကြီး ရှေးဟောင်းစေတီတော်ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ပေါ်က နေ ချင်းမိုင်မြို့အလှကိုလည်း လှမ်းမြင်နိုင်ပါတယ်။ နုမြတ်တို့ရောက်တုန်းက မိုးဖွဲကျ မြူတွေဆိုင်းနေလို့ မမြင်ခဲ့ရပါဘူး။ စေတီ ရင်ပြင်တော်မှာ စကျင်ကျောက်ဘုရား၊ မြဘုရား၊ သလင်းဘုရားစတဲ့ ကျောက်ပေါင်းစုံနဲ့ ထုစစ်ထားတဲ့ ဆင်းတုတွေ တွေ့ခဲ့သလို၊ စေတိကို လက်ဝဲရစ် သုံးပတ်ပတ်ကာ ဘုရားစာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေသူတွေလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဘုရားမှာ ကိုယ့်နာမည်ထိုးကာ ခေါင်းလောင်းလည်း လှူနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းလောင်းတစ်လုံးကို ဘတ် ၃၀ (ကျပ်၁ထောင်ကျော်) ပါ။
ဒီ LIVE video link ထဲမှာ ဘုရားဖူးနိုင်သလို ဘုရားသမိုင်းကို သေချာ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်။
နေ့လည်စာကို ချင်းမိုင်စာတွေရောင်းချတဲ့ ဒေသဆိုင်မှာ တဝတပြဲစားပြီးနောက် ဈေးဝယ်ထွက်ကြပါတယ်။ Warorot Market နဲ့ To Lam Yai Market လို့ခေါ်တဲ့ ချင်းမိုင်ဈေးတွေပါ။ ဒေသခံတွေရဲ့ ဈေးဖြစ်တဲ့ အလျောက် local products တွေ စားသောက်ကုန်တွေပေါပါတယ်။ Tourist တွေလည်းလာလို့ အမှတ်တရ ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ်တွေကတော့ ကလေးကျောပိုးထားတဲ့ ချင်းမိုင်ရိုးရာ အရုပ်လေးရယ်၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အစုံ အစာသွပ်ထားတဲ့ ချင်းမိုင် ဝက်အူချောင်းကြော်စပ်စပ်လေးရယ် အိမ်အပြန်လက်ဆောင် ဝယ်သွားပါတယ်။
အဲ့ဈေးတွေကနေ တစ်ဖက်ကမ်းကို တံတားနဲ့ ကူးတဲ့ အခါမှာ Wat Ket ရပ်ကွက်လို့ခေါ်တဲ့နေရာရောက်ပါတယ်။ အဲ့မှာ ရှေးနှစ်ပေါင်း ၅၀၀ကျော် ၆၀၀လောက်က မြန်မာတွေ တည်ထားခဲ့တဲ့ Wat Ket ဘုရားနဲ့ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေပြသထားရာ ပြတိုက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့မှာ မြန်မာ ပိုက်ဆံတွေရော မြန်မာရှေးဟောင်း ကြိုးကြီးချိတ်ထမီတွေ၊ မြန်မာရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေပါ ပြသထားတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
တစ်နေကုန်ပင်ပန်းထားကြတော့ ချင်းမိုင်ရဲ့ နာမည်ကြီး Luxury Spa ဖြစ်တဲ့ Oasis Spa ကို ရောက်သွားကြပါတယ်။ ချင်းမိုင်မှာ Spa တွေ massage တွေ နာမည်ကြီးပြီး ဆိုင်တွေ များစွာ ရှိတဲ့ထဲက တကယ့်ထိပ်တန်းဆိုင်လို့ သိရပါတယ်။ King of Oasis နာမည်ရှိတဲ့ Treatment ကို ယူဖြစ်ပါတယ်။ ဘတ် 4000 ကျော်ကျပါတယ်။ ထိုင်းရိုးရာ အပူပေးပြီး ဆေးစိမ်ထားတဲ့ ကြပ်ပူနဲ့ ကိုယ်အနှံ့လိုက်ထိုးပေးတာ အတော့်ကိုကောင်းပါတယ်။ စပါးလင်အနံ့လေးသင်းနေတဲ့ အဆီနဲ့ တကိုယ်လုံးကို လိမ်းပြီး နှိပ်နယ်ပေးတော့ အကြောအချဉ်တွေ တကယ်ပြေသွားပါတယ်။ ၂နာရီကြာတဲ့ Treatment အပြီးမှာ တကိုယ်လုံးပေါ့ပါးပြီး ညဈေးတွေ ပတ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေကြပြီပေါ့။
ညဈေးမပတ်ခင် Oasis Spa နားက Wat Pra Singha ဘုရားကျောင်းမှာလည်း ဘုရားဝင်ဖူးခဲ့ပါသေးတယ်။
ချင်းမိုင်မှာ ညဈေးအများကြီးရှိပါတယ်။ ရှေးဟောင်းမြို့ဖြစ်တဲ့ ချင်းမိုင်မှာ မြို့ရိုးတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ မြို့လေးဘက်မှာ ဂိတ်လေးခုရှိတဲ့အနက် Chiang Mai Gate နဲ့Chang Puak North Gate တို့မှာ Night Market တွေ ညတိုင်းရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Weekends တွေမှာ Saturday Walking Street? Sunday Walking Street ဆိုပြီးတော့လည်း ရှိပါသေးတယ်။ Night Bazzar တွေ Night Plaza တွေနဲ့ ညဘက်လည်ပတ်စရာတွေ အများကြီးပါ။
ဒိနေ့ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးတောင် Doi Inthanon ကို တက်မှာမို့လို့ ချင်းမိုင် ဟိုတယ်ကနေ မနက်ကတည်းက Check Out လုပ်ရပါတယ်။
တော်ဝင်ပန်းခြံဟာလည်း ပန်းမြို့တော် ချင်းမိုင်မှာ သွားသင့်တဲ့နေရာလေးပါ။ ပန်းပေါင်းမျိုးစုံရှိတဲ့ပန်းခင်းတွေ၊ သစ်ခွခြံတွေ၊ထင်းရူးတောတွေရှိသလို ပန်းခြံအလည်မှာ နတ်ရွာစံသွားတဲ့ ဘုရင်ကြီးကို ရည်စူးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ပြသာဒ်ဆောင်ကြီးလည်း ခမ်းနားစွာ ရှိလို့နေပါတယ်။ ချင်းမိုင်ရိုးရာအိမ်တွေ၊ Culture တွေနဲ့ တခြားလေ့လာစရာ ဓာတ်ပုံရိုက်စရာနေရာတွေလည်း ရှိလို့ အနည်းဆုံး ၁နာရီလောက်တော့ကြာမယ်နော်။ ပန်းခြံကို ပတ်နေတဲ့ ကားလည်း ရှိပြီး အဲ့ကားနဲ့ လိုက်စီးကာ ကိုယ်လေ့လာချင်တဲ့နေရာမှာ ဆင်းလေ့လာရုံဆိုတော့ အတော်အဆင်ပြေပါတယ်။
Royal Park Live video link က https://www.facebook.com/numyat/videos/10154260246928412/
ဆင်စခန်းတွေကလည်း ချင်းမိုင်မှာ များမှများပါ။ နုမြတ်တို့ကတော့ ဆင်စခန်းတစ်ခုကိုခဏဝင်လေ့လာခဲ့တယ်။ ဆင်ပေါက်လေးတွေလည်းတွေ့ရပြီး ဆင်လေးတွေက လူတွေယဉ်နေတယ်။ ဆင်အနမ်းတောင်ခံလိုက်ရသေးတယ်။ ဆင်စခန်းမှာရိုက်ထားတဲ့ LIVE video နဲ့ ဆင်နမ်းနေတဲ့ Video file လေးကို ဒီLink တွေမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဆင်စီးချင်လည်း စီးလို့ရတယ်။ https://www.facebook.com/numyat/videos/10154260539593412/
Wat Pra That Jom Thong
တောင်အသွားလမ်းမှာ ဘုရားဝင်ဖူးပြီး ချည်ထည်တွေဗိုင်းငင် ရက္ကန်းရက်တဲ့ ရက္ကန်းရုံကိုလည်း ဝင်ရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အင်သာနုံဘုရင်ပိုင်ခဲ့တဲ့ ပျဉ်ထောင်အိမ်ကြီးကို အိမ်ပေါ်မှာပြတိုက် အိမ်အောက်မှာ ရက္ကန်းရုံအဖြစ်ရက်လုပ်နေဆဲပါ။
တောင်ပေါ်က ဟိုတယ်လေးက တော့ Touch Star Resort ပါ။ ဘန်ဂလိုလေးတွေနဲ့ ချစ်စရာ ဟိုတယ်လေးပါ။ ဝက်ရုပ်လေးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတာ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဟိုတယ်ကို ညနေ ၄နာရီလောက်ကတည်းက ရောက်နေပေမဲ့ နောက်နေ့မနက် ၄နာရီ ထရမှာကြောင့်ရော ခရီးပန်းနေပြီမို့လို့ရော ဘယ်မှ မသွားတော့ပဲ ဟိုတယ်မှာပဲ ညစာစားပြီး နောက်နေ့အတွက်အားမွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဝင်ကြေး – Tourist ဘတ် 300. Local ဘတ် 100
ဒီတောင်ကို ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ မျက်နှာကျက်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ အမြင့်ပေ ၈၀၀၀ကျော်မှာရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးတောင်မို့လို့ပါ။ ရှမ်းရိုးမတောင်တန်းတွေနဲ့ တဆက်တည်းရှိပြီး မြန်မာတောင်တန်းတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ အရမ်းမြင့်တယ်လို့ မဆိုသာပါဘူး။ ဒီတောင်ပေါ်က မြင်ရတဲ့ နေထွက်ချိန်ရှုခင်းကတော့ စာဖွဲ့လို့ မရလောက်ပါဘူး။ မနက် ၅နာရီကတည်းက ဟိုတယ်ကနေထွက်ကာ တောင်ပေါ်ကို ကားနဲ့ တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ နေထွက်ချိန်ကြည့်တဲံနေရာက တောင်ထိပ်မှာ မဟုတ်ဘဲ တောင်တက်လမ်းတစ်နေရာမှာပါ။ ကားလမ်းဘေး ကားရပ်ထားကြပြီး ကားလမ်းဘေးတစ်ဖက်ကနေ နေထွက်ချိန်ကို လာကြည့်ကြတာပါ။ မနက်စောစာစီးစီး ရာသီဥတုကလည်းအေးတော့ ဘယ်သူမှ မရှိလောက်ဘူး မထင်ပါနဲ့။ ကြိတ်ကြိတ်တိုးကြည့်ရတာပါ။ တစ်နေရာရအောင် မနည်းတိုးခဲ့ရတာပါ။
တိုး၇တာနဲ့တော့တန်ပါတယ်. နေထွက်လာတာတော်တော်လေးကို လှတယ်ရော… ရောင်နီလင်းလာတဲ့ ပုစါန်ဆီရောင်ကောင်းကင်ရှေ့မှာ တိမ်ဖြူဖြူတွေ အလိပ်လိုက် အလိပ်လိုက်ရှိနြေ့ပီး အဲ့တိမ်တွေထဲက အနီရဲရဲ နေလုံးပေါက်စလေးက အောက်ကနေအပေါ်ကို တရွေ့ရွေ့ ထိုးဖောက်ထွက်လာတာ အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။
တောင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာမှာ တောလျှောက်လမ်းလုပ်ထားပြီး အမှတ်အသားဆိုင်းဘုတ်လည်းထားရှိပါတယ်။ အင်သာနုံပြည်နယ် ဘုရင်ရဲ့ အုတ်ဂူလည်းရှိလို့နေပါတယ်။ တောင်ထိပ်နားက သဘာဝတောလျှောက်လမ်းလေးမှာလည်း လျှောက်သင့်ပါတယ်။ တကယ်ကို တောထဲ ရောက်နေသလို နေပြောက်လေးတွေကလည်း တချက်တချက်ထိုးနေပြီး အေးချမ်းလျပါတယ်။ နာရီဝက်လောက်ပဲကြာမှာပါါ။ အဲ့မှာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အသက်သွေးကြော ကျောက်ဖရားမြစ် မြစ်ဖျားခံရာ စမ်းချောင်းလေးလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
တောင်ထိပ် နေထွက်ချိန်ရှုခင်း၊ သဘာဝတောလျှောက်လမ်းလေး Video ကတော့ ဒီမှာပါ။
နေထွက်ချိန်ကြည့်တဲ့နေရာနားမှာ နတ်ရွာစံသွားတဲ့ ဘုရင် သက်တော် ၆၀ပြည့်က ဘုရင်ကြီးနဲ့ မိဖုရားကြီးကို ရည်စူးပြီးတည်ထားတဲ့ စေတီ၂ဆူကပ်လျှက်ရှိပါတယ်။ ဒီစေတီတွေပေါ်က မြင်ရတဲ့ တိမ်တွေတောင်တွေရှုခင်းက လှပလွန်းလို့ သွားသင့်ပါတယ်။ တိမ်ပင်လယ်ကြီးတွေကိုယ့်အောက်မှာ ရောက်နေသလို ခံစားရတဲ့ ရှုခင်းပါ။ တောင်ပေါ်ဘုရားပေါ်က Live Video ကတော့ ဒီမှာပါ။
နောက်ပြီး တောင်ပေါ်မှာ Royal Project လို့ခေါ်တဲ့ ပန်းခြံတွေ၊ Organic စိုက်ခင်းတွေ၊ Resort တွေလည်းရှိပါတယ်။ ရေတံခွန်တွေလည်းရှိပြီး Wachiratan Waterfallကတော့ သွားရလွယ်ပြီး လှပကြီးမားတဲ့ ရေတံခွန်ကြီးပါ။ ရေတံခွန်ကြီးရဲ့ LIVE video က ဒီမှာပါ
ဒီနေ့လည်း ဟိုတယ်ကို စောစော ပြန်ရောက်ပါတယ်။ ညနေ၄နာရီလောက်ပါ။ တောင်ပေါ်မှာ ဘာမှ လုပ်စရာမရှိလို့ စောစောစီၤးစီးအနားယူကာ အိပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီနေ့ကတော့ရန်ကုန်ပြန်တဲ့နေ့ပါ။ တောင်ပေါ်ကနေ လေဆိပ်ကို တစ်ခါတည်းတန်းဆင်းပါတယ်။
နုမြတ် ချင်းမိုင်ကိုရောက်တာ ဒါ ဒုတိယမြောက်ပါ။ ပထမတစ်ကြီမ်တုန်းက ချင်းမိုင်ရိုးရာ အကအလှတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေတဲ့ Khum Khan Toke စားသောက်ဆိုင်ကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နေရာလည်း ချင်းမိုင်သွားတဲ့ သူတွေ မရောက်မဖြစ်နေရာပါပဲ။ ဟင်းပွဲတွေကို ဆွမ်းတော်အုပ်နဲ့ ချကျွေးတာပါ။
ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် တဝက်ပြိုကျသွားတဲ့ ထုထည်ကြီးမားတဲ့ Wat Chedi Luang ကိုလည်း သွားရောက်ဖူးမြော်သင့်ပါတယ်။
အထူးအဆန်းတွေ စိတ်ဝင်စားရင် World Insects Museum သွားကြည့်ပါ။
အပျော်ဓာ်ပုံရိုက်ချင်ရင်တော့ 3D Art Museum ကို သွားပါ။
Adventure စိတ်ဝင်စားရင် တောတါင်းသားတာဇံလို သစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့ တစ်ပင်ကြိုးနြ့ ကူးရတဲ့ Zipline Adventure တို့ Flight of Gaboon ဆိုတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
ဂေါက်ရိုက်ဝါသနာ ပါသူတွေအတွက် သာယာလှပတဲ့ ဂေါက်ကွင်းတွေလည်း အများကြီးပါ။
Night Safari မှာ အစာကျွေးတဲ့ အခါ Zebra ကို သတိထားပါ။ သွားတွေက ချွန်ထက်နေတာကြောင့် လက်နဲ့ ကျွေးလို့ ကိုက်မိရင် လက်ပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်။
Walking Street က တော်တော့်ကို ရှည်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တာလေးတွေ တွေ့ရင် ဝယ်ထားလိုက်ပါ။ နောက်ပြန်လှည့်ဝယ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ ပေါပေါလောလောတွေ့ရတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို တော့ Walking Sreet ထိပ်နားမှာ မဝယ်ပါနဲ့။ ဈေးပိုကြီးလို့ပါ။ ဆုံးခါနီးလေ ဈေးသက်သာလေပါ။
လူများရင် တောင်ပေါ်က Royal Project ထဲက Resort မှာ ညအိပ်ပါ။ လူ၅ယောက်ဆန့်တဲ့ တစ်အိမ်လုံးမှ ဘတ် 7500 လောက်သာရှိတာပါ။
Doi Inthanon တောင်ပေါ်ကဆင်းတဲ့နေ့မှာ တောင်ပေါ်မှာ မအိပ်ပါနဲ့။ ချင်းမိုင်ပြန်အိပ်ပါ။ ချင်းမိုင်မှာ လည်စရာတွေ အများကြီး ရှိလို့ပါ။ တောင်ပေါ်မှာက ညဘက်ဘာမှ လုပ်စရာမရှိပါဘူး။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ချင်းမိုင်အကြောင်းသိချင်တာတွေ ရှိရင်လည်း လှမ်းမေးနိုင်ပါတယ်။ သိသလောက်ဖြေပါ့မယ်။ ဒီ Post ကိုလည်း Share နိုင်ပါတယ်။ ပုံတွေထဲမှာလည်း ရှင်းပြထားပါသေးတယ်။
January 14, 2017 April 21, 2021 Posted in Adventure, Africa, Asia, Travel, UncategorizedTagged Asia, Europe, Experience, Malaysia, Mingalarpar, MRTV4, Nature, Netherlands, Ocean, Talkshow, Travel, TVshow, YangonLeaveacomment
MRTV4ရဲ့ မင်္ဂလာပါ အစီအစဉ်မှာ သွားခဲ့တဲ့ ခရီးတွေ အကြောင်း LIVE ပြောခဲ့တာတွေ စုစည်းထားတာပါ။ Pyone Play Website နဲ့ App မှာ တချို့ အစီအစဉ်တွေ ပြန်ပြလို့ ပြန်ရှာပြီး စုစည်းထားတာပါ။ နောက်ပိုင်းလည်း ဆက်ပြီး ပြောဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Replay link တွေကို လည်း ထပ်ထည့်ပေးပါမယ်
Hollywood သို့ အလည်တစ်ခေါက်
Egypt Pyramids Part 1
Egypt Part2(အီဂျစ်နိုင်ငံက အခြားနေရာများ)
Greece- Santorini (ဂရိနိုင်ငံ ဆန်တိုရီနီကျွန်း)
Italy Venice (အီတလီရေပေါ်မြို့လေး ဗင်းနစ်)
Germany Neuchwanstein Castle (ဂျာမနီမှ နတ်သမီးပုံပြင်ရဲတိုက်ကြီး)
(နယ်သာလန်နိုင်ငံက ကျူးလစ်ပန်းခင်းတွေနဲ့လေရဟတ်ကြီးတွေ အကြောင်း)
Monaco (ကမ္ဘာ့ဒုတိယအသေးဆုံး မိုနာကိုနိုင်ငံ)
Switzerland Jail Hotel (ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံ )
Nepal (နီပေါနိုင်ငံမှ အထင်ကရနေရာများ)
Taiwan (ထိုင်ဝမ် ကျွန်းနိုင်ငံ)
Chiang Mai and Doi Inthanon
ထိုင်းနိုင်ငံက ချင်းမိုင်မြို့နဲ့ အမြင့်ဆုံးတောင် Doi Inthanon အကြောင်း
Events and Activites Trips
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာက Travel Bloggers ပြိုင်ပွဲနဲ့ အခြားလည်ပတ်စရာတွေ အကြောင်း
Malaysia ACEQM 2016 (ASEAN Celebrity Explore Quest Malaysia 2016)
Bangkok Gems and Jewellery Fair 2016 (ဘန်ကောက်ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ)
ပြည်တွင်း (Local Trips)
Myeik Archipaelego Southernmost Part of Myanmar
မြန်မာပြည်တောင်ဘက်စွန်း ကော့သောင်းနဲ့ မြိတ်ကျွန်းစုအကြောင်း
Mandalay နားက ၇မိုင် ကမ်းခြေ